၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် မှစတင်၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဂျပန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ကျမှုအခြေအနေများ (2000) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌လှုပ်ရှားမှု
အပန်းဖြေများ၏လူမှုဗေဒ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, စစ 1-25
ပထမဦးစွာအွန်လိုင်း: 24 ဇန်နဝါရီလ 2019
ဂျပန်မှာတော့ပိုပြီးလူငယ်များန်းကျင်အခြားတစ်ဖက်, အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို 2000.On အလားတူကာလအတွင်းပြန့်နှံ့ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ကတည်းက 2005s အတွက်လိင်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းအတွက်, အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ငါးဆင့်နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်ဂျပန်လူငယ်၏လိင်မှဖြစ်ပျက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်: Otaku အပန်းဖြေ e-mail နဲ့ SNS, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း, စိတ်ကူးယဉ်လောကက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များချိန်းတွေ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု စက်မှုလုပ်ငန်း။ လုံးဝအထီးဗဟိုပြုရူပါရုံကိုအတူအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာများကိုနှင့်ခိုင်ခံ့သောလှုံ့ဆော်မှုများအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသည့် 2000s အတွက် overflew ။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးကိုမှန်ကန်လိင်ဆက်ဆံအတွက်အခက်အခဲများတယ်ပါပြီ။ လူငယ်၏ရင်ခုန်စရာလိုအပ်ချက်များနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်ဖို့ animations နှင့်ဂိမ်းများကိုမှန်ကန်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်လွှမ်းမိုးဖို့, 2000s အတွက်လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအပိုင်း၌, နည်းပညာနှင့်လိင်အပေါ် Cross-ယဉ်ကျေးမှုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ၏လိုအပ်မှုကိုအခိုင်အမာရှိပါသည်။
အင်တာနက်ကို အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း Otaku ယဉ်ကျေးမှု ဂျပန်လူငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inactivation
ကမ္ဘာတဝှမ်းခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းလိင်နှင့်နွေးထွေးမှု (သီတင်းပါတ်အတွက်အမြဲတမ်းတော်လှန်ရေးအလယ်၌ဖြစ်ဆိုသည် 2007) ။ လူမှုဗေဒတိကျစွာသည်ဤတော်လှန်ရေးဖမ်းဆီးဖို့အဘို့ထိုသူတို့အားလပ်, လူ့အခွင့်အရေး, နှင့်မိသားစုဘဝအဖြစ်လူဦးရေ replenishing နေဖြင့်လူမှုရေးရေရှည်တည်တံ့ရေးအပါအဝင်လူမှုရေးအသက်တာ၏ကျယ်ပြန့်, အကျိုးသက်ရောက်စေအဖြစ်ကအဖိုးတန်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားတော်လှန်ရေးဘာသာတရား, သမိုင်း, မိသားစုစနစ်ဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘောဂဗေဒနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား (Hekma နှင့် Giami ကနေသိသိသာသာကွာခြားကြသည် 2014) ။ ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးတကယ်ဖြစ်ပေါ်သံသယရှိရာကမ္ဘာပေါ်တွင်အဒေသများလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်လိင်အဓိကအားဖြင့်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းအဖြစ်လေ့လာဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ Non-အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်းဖို့သတိထားရမှာကိုတော်လှန်ရေးတစ်ဦးရှင်းလင်းခြုံငုံရုပ်ပုံကိုငါပေးမည်။
အဆိုပါ 2000s ကတည်းကကမ္ဘာပေါ်မှာအများအပြားလူ့အဖွဲ့အစည်းကဒီနည်းပညာအသစ်များ၏အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး-The ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြန့်ပွားကြုံတွေ့ကြသည်။ ဤကာလအတွင်းထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးအပြောင်းအလဲများကအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ခဲ့ကြပြီ။ နည်းပညာသိသိသာသာဆက်သွယ်ရေး, တွေ့ဆုံ, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်က Attwood (ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်လေးနက်နည်းလမ်းလိင်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းပြောင်းလဲသွားပြီ 2018; Turkle 2012).
အင်တာနက်နည်းပညာ Kon (In-လူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးချဲ့နှင့်လိင်နှင့်ရင်းနှီးသောလှုပ်ရှားမှုများထောက်ခံ 2001) ။ သို့သော်အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအစသိသိသာသာအသစ်တစ်ခုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းတိုးချဲ့ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်, unmediated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံများနှင့်ရင်းနှီးမှု (ဟွန်ဒါဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် 2005) ။ ဒါဟာခေတ်သစ်လိင်၏ဝိရောဓိတဦး (ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ် 2007): အဆိုပါထောင်စုနှစ်သစ်အတွက်အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အပန်းဖြေကိုသက်ဝင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာအကြောင်းမရှိလူတွေစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်မောဟ၏တံခါးပိတ်ဤလောကသို့ In-လူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကနေဆုတ်ခွာဖို့သနည်း အဆိုပါရလဒ်သစ်ကိုနည်းပညာနှင့်လိင်အကြားရှုပ်ထွေးအပြန်အလှန်အားဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်သည်။
အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအတွင်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ 2000 န်းကျင်ကတည်းကဂျပန်အတွက်တခုပြီးတခုဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ၏အသီးအသီးပုံစံသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတစ်ခုအခြို့သောရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပုံ၏အသေးစိတျ, အရှင်ဝေး, လုံလုံလောက်လောက်ဆန်းစစ်ကြပြီမဟုတ်။ ဂျပန်မှာတော့ကမကြာခဏလူတွေကအင်တာနက်ပျံ့နှံ့ပြီးနောက်လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံစတင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော်သေးဒီမျှပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ဤစာတမ်းတွင်ကျနော်တို့လိင်နှင့်အင်တာနက်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအကြားဆက်စပ်မှုတွေနှင့်တကွအကျိုးဆက်များဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ကနေမြင့်မားထိတွေ့နှင့်အသစ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများအားဖြင့်ထိခိုက်သူ twentysomethings, ရန်, လူငယ်များအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤစာတမ်း၌, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ, SNS (လူမှုကွန်ရက်န်ဆောင်မှု), ဂိမ်းများ, အရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များ, ကိုက်ညီက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအခြား devices, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် applications များကိုကိုးကားပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချရေးနှင့်ပတ်သက်သောခံရဖွယ်ရှိပုံရသည်။ ကျနော်တို့လိင်အပေါ်ယခင်သုတေသနမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုအပေါ်ဒေတာ, SNS, ဂိမ်းများ, အရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များ, ကိုက်ညီက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များနှင့်သက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်မြေတပြင်လုံးရုပ်ပုံဆွဲပါလိမ့်မယ်။1
ပထမဦးဆုံးအခနျးတှငျ, ငါတို့ဂျပန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်နှင့်အပြုအမူအတွက်ဆိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်လည်းသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာထက်အခြားဆိုင်းကိုထိခိုက်ဖို့စဉ်းစားအချက်များဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအခန်းကြီးတှငျကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်နှင့်အပြုအမူများတွင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့စဉ်းစားငါးအဆင့်အတွက်ဂျပန် 2000 ကတည်းကသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကိုရည်မှတ်ဆိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရှုမည်, ထိုသို့လိင်အတွက်ပြောင်းလဲမှုဆက်စပ်ပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ။ နောက်ဆုံးအစိတျအပိုငျးတှငျကြှနျုပျတို့အစောပိုင်းကဆှေးနှေးခဲ့သူတွေကိုထက်အခြားအများအပြားအချက်များ hypothesize ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလေးအနက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါဖြစ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်အဆိုပြုပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းအချို့သောသုတေသနပြုသည့်အကြောင်းအရာများသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်လိင်နှင့် ပတ်သက်. အနာဂတျမှာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့ထောက်ပြပါလိမ့်မယ်။
1 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိစိတ်ကိုနှင့် 2000 ကတည်းကဂျပန်လူငယ်၏အပြုအမူ: Inactivation, လစျြလြူရှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောပုံရိပ်အဖြစ်ကောင်းပြီအဖြစ်အမျိုးမျိုး
2000 န်းကျင်ကတည်းကဂျပန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောအပြောင်းအလဲခံယူ။ ကြောင့်စသည်တို့ကိုစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေ, မျိုးဆက်, ပထဝီဒေသမှလူမျိုးကွဲအကြားခြားနားချက်များကြီးတွေခဲ့ကြပြီ။ ရှိခဲ့သည်နှင့်လိင်တက်ကြွနေသောများစွာသောလူငယ်များဖြစ်ကြသည်; ကျနော်တို့ကဂျပန်တစ်ပုံစံတည်းလိင်မလှုပ်ရှားနေကြသည်ဟုမယူဆနိုင်ပါ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ဂျပန်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုနှုန်း 2005 န်းကျင်ကတည်းကတိုးလာသည်ဟုအချို့သောအဘို့ငါသိ၏။
sexless စုံတွဲများ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်း2 အဆိုပါ 1990s ထွက်ထောက်ပြနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါ 2000s ကနေလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းများ sexless စုံတွဲများနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက 2016 အတွက်အိမ်ထောင်သည် (47.2 မှအသက် 16) ၏ 49% (JAFP sexless ခဲ့ကြသည် 2017; Pacher 2018).3 sexless စုံတွဲများနှုန်းပင်လူငယ်များအကြားတိုးပွားလာခဲ့သည်။ သူတို့၏မိဘများကိုပိုပြီး sexless ကြောင့်အဆိုပါမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ, ယခင်အစဉ်အဆက်ထက်တစ်ဦးရင်းနှီးမိသားစုဘဝနှင့်လိင်ပေါင်းစပ်ပြီးပိုမိုအခက်အခဲရှိသည်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။
ထို့အပြင် ပို. လူငယ်များတစ်ခုတည်းကျန်ရှိနှင့်လိင်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်။ လူငယ်များတို့တွင်လက်မထပ်ရသေး၏နှုန်းမှာ 1975 န်းကျင်ကတည်းကအဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျနောက်မှ 2000s နှင့်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဖက်ခြင်းမရှိဘဲခင်ပွန်းမရှိသောလူမျိုး၏ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ 20-24 အသက်တစ်ကိုယ်ရေလူများ၏အချိုးအစား (ယောက်ျားတို့အတွက် 38.7 အတွက်% 2002 ဖို့မိန်းမတို့အဘို့ 55.3 အတွက်% 2015 နှင့် 48.8 အတွက် 2002% မှ 67.5 အတွက် 2015% ကနေတိုးမြှင့်ပြည်သူ့အင်အားအမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးသုတေသန) ။ တစ်ဦးချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ခဲ့ဖူးဘူးသူကိုတစ်ခုတည်းလူများ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (အသက် 20-24) နဲ့လက်မထပ်ရသေးလူမျိုး၏နှုန်းမှာ 36.3 အတွက် 2005% နှင့်အမျိုးသမီး 46.5 အတွက်% 2015 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ လူတို့သညျအဘို့ 33.6 အတွက် 2005% နှင့် 47.0 (ပြည်သူ့အင်အားအမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးသုတေသန) တွင်% 2015 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။4
ငါတို့မြင်သည်အတိုင်း, 2000s ကတည်းကပိုမိုလူငယ်များလိင်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာကြပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောပြည့်တန်ဆာအဖြစ် couplehood အပြင်ဘက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ (အဘယ်သူမျှမစာရင်းအင်းစစ်တမ်းဒီအပေါ်ပြုမိခဲ့ပြီးပေမယ့်) သို့သော်ထိုလှုပ်ရှားမှုများစုံတွဲများအကြားလိင်အတွက်ကျဆင်းမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်လုံလောက်သောအလားတူကာလအတွင်းတိုးပွားလာကြပြီမဟုတ်။ စုံတွဲများပြင်ပလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အသေးစိတ်သုတေသနပြုလိုအပ်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ inactivation ဤဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းအချက်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ပါ။ သို့သော်မမှန်အလုပ်အကိုင် (ဆင်းရဲသောသူတို့ကိုထပ်) နဲ့လူပျိုတို့နှင့်အမျိုးသမီးများ၏နံပါတ်များကိုအတွက်တိုးအဓိကအချက်တစ်ချက်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ တက်ကြီးထွားလာစီးပွားရေးဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောဘဝစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်သောဤသူလူငယ်များ, ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အလုပ်လက်မဲ့များနှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်းစားရန်အနည်းငယ်သာအခန်းတစ်ခန်းရှိသည်, အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား (Sato နှင့်နာဂအိနထေိုငျစိုးရိမျရ 2010) ။ မမှန်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူယောက်ျားဟာသူတို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဝေးသူတို့ (Okubo et al မည်ဟုမျှော်လင့်သောအရာကိုအောက်ရောက်နေသည့်အတွက်, သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှာယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးဖို့အထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ 2006) ။ မေတ္တာနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်မိတ်ဖက်အဖြစ်, အမျိုးသမီးများတည်ငြိမ်, အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေကောင်းကောင်း (ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရုံးနှင့်အတူယောက်ျားကြိုက်တတ်တဲ့ 2011) ။ ထို့ကြောင့်, မမှန်အလုပ်အကိုင်နှင့်အတူယောက်ျားထင်လေ့: "ငါလက်ထပ်ဖို့မလိုချင်ကြဘူး" သို့မဟုတ် "ငါရင်ခုန်စရာမေတ္တာ၌စိတ်ဝင်စားမ" နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်နေဖို့။5
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မှန်မှန်အလုပ်လုပ်ကြသူလူငယ်များကြောင့်အလုပ်များမှကုန်ခံရဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ကြောင့်အလုပ်များမှစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်ပင်ကျူးလွန်သတ်သေခံစားနေရပြီးလူများ၏အရေအတွက်သည် (Kumazawa တိုးမြှင့်ထားပြီး 2018) ။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာမချစ်ခင်မဟုတ်သလိုမေတ္တာတော်ကိုခံစားကြရသည်။ သူတို့လက်ထပ်ရရင်တောင်သူတို့ (Genda လိင်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာ 2010).
Yushi Genda ၏ 2005 စစ်တမ်းအရနှင့် Aera မဂ္ဂဇင်း (အလုပ်သူလက်ထပ်ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ cohabiting ခဲ့ကြသည်တဲ့သူတွေကိုပစ်မှတ်ထား), ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအကြား, ထိုကဲ့သို့သောရှုတ်ချမှုများနှင့်အလုပ်လက်မဲ့အဖြစ်အလုပ်မကျေနပ်မှုကြုံတွေ့ဖူးသောသူတို့မူကားမိတ်ဖက်နှင့်အတူ "လူအပေါင်းတို့မှာလိင်ဆက်ဆံမဟုတ်" ခံရဖို့ ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏ တူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်ထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ယုတ်မှုကြုံတွေ့ဘူးသောသူထက်။ မိန်းမတို့အဘို့, အလုပ်စိတ်ပျက်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ကလူဖြစ်ခဲ့သည်ထက် sexlessness ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုလည်းမကောင်းတဲ့ "အလုပ်ခွင်လေထု" ကိုရှင်းလင်းစွာ sexlessness နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ JGSS စစ်တမ်းအစဉ်အဆက်အလုပ်လက်မဲ့ခဲ့သောသူတို့၏အမျိုးအ 2000% sexless စဉ်သူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်သုံးဆယ်အတွင်းမယားများအကြား, အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောသူတို့၏အမျိုးအ 2001%, sexless ခဲ့ (9.8 နှင့် 23.5 အတွက်စစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များကိုပေါင်းစပ်ပြီး) ထင်ရှား ။ ဤသည်ခြားနားချက်တူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စု၏ခင်ပွန်း၏အမှုထက်ပိုကြီးခဲ့သည်။ Genda နှင့် Saito သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်လိင်ဆက်ဆံပေမယ့်သူမပယ်ချခံခဲ့ရပြီးနောက်မရှိတော့လိင်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တာခဲ့သောသူမ၏နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုကိုးကား။ ငါတကယ်ပင်ပန်းနေပါတယ်နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံအလေးအနက်ဆိုသည်သည့်အခါ "ငါအော်ဂဇင်မရဘူး။ ငါတတ်နိုင်သမျှအိပ်ချင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်လျင်မြန်စွာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ လိင်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု "(Genda နှင့် Saito လုပ်ကိုင်ဖို့အတော်လေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် 2007).
ရေရှည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုလှစ်ဟပြလိုက်သလိုထို့ကြောင့်အလုပ်အကိုင်, အလုပ်သမားများနှင့်စီးပွားရေးပြဿနာများကျိန်းသေသည် 2000s အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါစေ၏။
အလုပ်လုပ်လူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်တဦးတည်းကြောင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း, အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်6 ကျောင်းသားများအတွက်အများကြီးလျော့နည်းအလုပ်အကိုင်, အလုပ်သမားများနှင့်စီးပွားရေးပြဿနာများ (တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုပိုထိခိုက်နစ်နာပါလိမ့်မယ်သော်လည်း) ကထိခိုက်နေကြသည်။ သို့သော်ဤကျောင်းသားများအတွက်လည်း 2000 သို့မဟုတ် 2005 န်းကျင်ကတည်းကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလျှော့ချပါပြီ။
လူငယျမြား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ JASE ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်းအဆိုအရ 1974 ကတည်းကရှစ်ကြိမ်ကောက်ယူ7, ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံကိုအဆင့်ဆင့်ပုံ (1999 သည်အထိကြီးပြင်းခြင်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း, အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား 1999 နှင့် 2017 အကြားတည်ငြိမ်။ 1) Co-ပညာရေးပျံ့နှံ့အဖြစ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, (ပုံနမ်း။ 2) နှင့်လိင် (ပုံ။ 3) 2005 သည်အထိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဲဒီနောက် 2017 သည်အထိငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံနှုန်းထားများထက်ပိုမို 40 နှစ်ပေါင်းအများကြီးမပြောင်းခဲ့ဘူး
ခေါ်ဆောင်သွားနမ်းအတွေ့အကြုံနှုန်းထားများ 2005 သည်အထိလျော့နည်းသွားထို့နောက် 2017 သည်အထိတိုးမြှင့်
2005, ထို့နောက် 2017 သည်အထိလျော့နည်းသွားသည်အထိလိင်အတွေ့အကြုံ၏နှုန်းထားများတိုးမြှင့်
ကျနော်တို့နမ်းခြင်းနှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင်အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကအင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးမတိုင်မီချီတက်ခဲ့ကွောငျးထိုအဆိုင်းအတွက်စောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ ဂျပန်မှာတော့အိမ်မထောင်မီလိင်၏လူမှုရေးလက်ခံမှုဟာ 1970s ကတည်းကပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ သူတို့အမျိုးသမီးငယ်အကြားဘုံဖြစ်လာခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထို 1980s နှင့် 1990s မှာတော့ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်လူပျိုတို့အကြားတွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (High-နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာ၏ခေတ်မတိုင်မီ Takahashi ကြိုးဖုန်းဖုန်းများနှင့်ပေဂျာ၏မီဒီယာအသုံးချဖို့လိုက်ခဲ့သည် 2007).
ငယ်ရွယ်ကျောင်းသားများအတွက်သတင်းအချက်အလက်တော်လှန်ရေးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးအထိခိုက်မခံခဲ့ကြကတည်းကတိကျမှုဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်အသစ်ကသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမှဆီလျှော်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့၏လိင်ပိုင်းစိတ်ကျရောဂါ၏အကြောင်းရင်းများထောက်ပြမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သို့သော်ကျနော်တို့ကနည်းပညာအသစ်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မအချက်များပြသဝံ့ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါလေးမှတ်ယခင်သုတေသနမှာတွေ့ရတဲ့အချက်များဖြစ်ကြသည်။
ပထမဦးစွာ JASE စစ်တမ်း၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာငယ်ရွယ်ကျောင်းသားများ၏လေ့လာမှုအလေ့အထများအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deactivate အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2000s ခုနှစ်တွင်ထိုနောက်မှ, ကျောင်းသားများပိုပြီးအပြင်းအထန်လေ့လာနေစတင်ခဲ့ပြီးရှည်အစားအားလပ်ရက်အပေါ်သွား၏အဘို့ (Katase 2018) ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ပြင်းထန်သောလေ့လာမှုစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးမသေချာမရေရာခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်ယူဆ။
ဒုတိယ, JASE စစ်တမ်း၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် 2000s အတွက်လူငယ်များလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းမကြာခဏသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလိင်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းဆွေးနွေးတင်ပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလိင်အကြောင်းပြောဆိုသူကိုနုပျိုကျောင်းသားများကိုလိင်တစ်ဦးအပြုသဘောဆောင်သောပုံရိပ်ကိုရှိသည်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေရှာတွေ့သည်။ သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်ကိုရည်မှတ်လူငယ်၏ multipolar နှင့်ကြောင့်အင်တာနက်ပျံ့နှံ့၏, ငယ်ရွယ်ကျောင်းသားများကိုလိင်တစ်လျော့နည်းအပြုသဘောဆောင်သောပုံရိပ်ကို (Harihara ထောက်ပံ့သောအင်တာနက်ပေါ်ရှိရှာဖွေနေမှ sex အကြောင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစကားစမြည်ကနေပြောင်းရွှေ့ 2018).
တတိယလိင်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များလည်းအချက်တစ်ခုဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကြောင်းကိုယခုနှစ် 2000 ပြီးနောက်ကျောင်းတွင်လိင်ပညာရေးကိုယ်ဝန်နှင့် STDs ၏အန္တရာယ် (လူမှုရေးအရမှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ) (နှင့်များစွာသောကိစ္စများတွင်သာပေါ်) အဓိကအားဖြင့်အာရုံစိုက်စတင်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, လူငယ်များမပြည့်မခြင်းနှင့်မဆင်မခြင်လိင်ဆက်ဆံရပ်တန့်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ကြောက်ရွံ့တော်မှာ (Katase 2018, 192) ။
စတုတ္ထနှစ်လယ်ပိုင်း 2000s ကတည်းကအချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်ရေစက်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအကြားရှိ၏။ အဆိုပါ 1990s မှစ. 2005 တဝိုက်တိုင်အောင်, အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကိုအပါအဝင်များစွာသောမိန်းမ, သူအပေါင်းတို့ထက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတဲ့လမ်း shared ။ အမြိုးသမီးမြားကိုသူတို့လိင်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြဘူးသော်လည်း, ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြမှလိင်ဆက်ဆံရန်တော်မှာ။ အလယ်ပိုင်း 2000s ကတည်းကအချစ်ဇာတ်လမ်းလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအလွန်ငြင်းဆန်ထားပါတယ်များနှင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုမလိုချင်ကြဘူးသောသူငယျရှယျအမြိုးသမီးမြား၏နံပါတ် (Tsuchida တိုးမြှင့်ထားပါတယ် 2018).
ဤရွေ့ကားလေးမှတ်သည်အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များထက်အခြားလူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deactivate အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။ နောကျအခနျးထဲမှာအကြှနျုပျတို့အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကိုအခြားအချက်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
2.1 E-Mail ကနှင့် SNS မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ရေး
ဂျပန်မှာတော့ PC ကို (ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ) နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာ 1995 ကတည်းကတိုးလာကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့်လူငယ်များသစ်ကိုမီဒီယာမှအလျင်အမြန်တုန့်ပြန်ပါပြီ။ 2000 ခုနှစ်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းသားတို့တွင်အမိုဘိုင်းဖုန်းပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်း Futakata (% 94.4 မှတိုးမြှင့် 2006, 87) ။ PC များပေါ်တွင်ခြုံငုံကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှုန်းသည်လည်းမြင့်တက်ဆက်ပြောသည်။
လူငယ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာအသုံးပြုမှု၏စတိုင်များယူနီဖောင်းမဟုတ်; သူတို့ကမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် PC ကိုအကြားခွဲခြားထားတယ်။ JASE နေဖြင့်တစ်ဦးက 2005 တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်းလူမှုရေးလူတန်းစား, ကျောင်းအမျိုးအစား, ပညာရေးအဆငျ့, ချစ်ကြည်ရေးအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (JASE အပါအဝင်အုပ်စုနှစ်စုအကြားအများအပြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့ 2007) ။ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၏အကြီးစားအသုံးပြုသူများကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမြို့မှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့, တက္ကသိုလ်အတွက်စာရင်းသွင်းမနှင့်လိင်တက်ကြွဖြစ်တော်မှာ။ PC များ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်8 အတော်လေးလူကန်လန်ခဲ့ကြသည်, ကောလိပ်များသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းအပ်ရန်တော်မှာ, မြို့ထွက်ဆွဲထားဖို့မတော်မှာနှင့်လိင်မလှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း, အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့မဟုတ် e-mail များ၏မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကိုနမ်းရှုပ်ချိန်းတွေ့တဲ့အဆင့်မြင့်မှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်ဖြစ်နှင့်သောကျောင်းသားများ, နှင့် PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောသူတို့ထက်လိင်။ ထက် ပို. သုံးလိင်မိတ်ဖက်ခဲ့ကြသူ 20 နှစ်အရွယ်များ၏အချိုးအစား PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်ထက်ပိုမိုဘိုင်းဖုန်း၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများသည်အကြား 60%, မိုဘိုင်းဖုန်း၏အလင်းသည်အသုံးပြုသူများအကြား 20% နှင့် 18% ရှိ၏ အဆိုပါနှုန်းထားကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် e-mail ကိုလဲလှယ်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လူတစ်ဦးအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသောသူတို့အားရာခိုင်နှုန်း 58.4 မိုဘိုင်းဖုန်း၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောယောက်ျားတို့တွင်အ% နှင့်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောအမျိုးသမီးအကြား 59.3% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နှုန်း 19 PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောယောက်ျားတို့တွင်အ% နှင့် PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောအမျိုးသမီးအကြား 21.3% အဖြစ်အနိမ့်ခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောယောက်ျား၏ 56.3% နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်း၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောယောက်ျား၏ 39.7% အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအုပ်စုနှစ်စုကွာခြားမှုတော့ရှိ9 (Takahashi 2007).
မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် PC များပဲလူကြိုက်များဖြစ်စတင်ခဲ့ကြသည်အခါ, 2005 န်းကျင်သည်အထိ, (ယင်းကဲ့သို့သော e-mail ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်) မီဒီယာဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုများကိုတိုးချဲ့, လူတစ်ဦးရှိလူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အပေါ် သွား. မိမိဆက်ဆံရေးခိုင်ခံ့စေ၏မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုအသုံးပြုတဲ့သူလူငယ်များ ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေး (Asano မှတဆင့် 2006) ။ မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းအထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 12.1% နှင့်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 6.5% 2005 အတွက်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာ (JASE ရန်, လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည် 2007) ။ အကြောင်းကို 2005 မှတဆင့်စျေးကွက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအသှငျအပွငျကနေ, မိုဘိုင်းဖုန်းများသိသိသာသာနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှစ်စဉ် (1997 စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့, 1999 အတွက်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်, 2000 အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းကင်မရာများ, ဒါကြောင့်အပေါ်) ထည့်သွင်း။ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏သေးငယ်တဲ့ screen ပေါ်မှာပြသအဆိုပါအတော်လေးကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်အကြီးအကျယ်မျက်နှာ-to-မျက်နှာတှေ့ဆုံများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကျယ်ပြန့်ပေမယ့်သူတို့မျက်နှာ-to-မျက်နှာအစည်းအဝေးများအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်အာရုံမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကို virtual ကမ္ဘာပူဇော်ခဲ့ပါဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, တူညီတဲ့ကာလအတွင်း, PC များအပေါ် e-mail, ဆက်သွယ်ရေး In-လူတစ်ဦးတွေ့ဆုံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့, လိင်အရာမှာ, PC များသာအရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များ (JASE များအတွက်တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည် 2007).
အဆိုပါ 1990s မှသည်နှစ်လယ်ပိုင်း 2000s ရန်, အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ဦးစန်းဖြစ်လာပြီးအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့မျိုးဆက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသီချင်းများ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတွေအဖြစ်အားလုံးမီဒီယာကြားပြောလေ၏။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတိုးမြှင့်ကျောင်းများနှင့်အလုပ်ခွင်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်ဆည်းရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းများကို, နှင့် 1990s, မေတ္တာနှင့်အိမ်ထောင်မှာပြီးသားကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအဖြစ်ကိုရိပ်မိဖြစ်လာခဲ့သည် (Yamada 1996) ။ ထို့ကြောင့်လူငယ်များအမှတ်စဉ်ဆက်ဆံရေးအတွက်စေ့စပ်နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လူတွေကတစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့အတှကျဒါဟာ (မရှိတော့ Tanimoto ရှားပါးခဲ့ 2008, အခန်း။ 3) ။
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အမျိုးသမီးငယ်များထဲတွင် "လျော်ကြေးချိန်းတွေ့" (ချိန်းတွေ့, သူတို့ရဲ့အတွင်းခံပေးခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တွေဘို့အရွယ်ရောက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ) ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းအဆိုပါ 1990s ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်လူမှုရေးအငြင်းပွားစရာများလှုံ့ဆျောထ (Enda 2001) ။ တိုကျိုမြို့ရှိအမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသား 4% တို့ကစစ်တမ်းတစ်ခုအရသိရသည်ထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့သကဲ့သို့အများအပြား Asahi Shinbun (Asahi Shinbunစက်တင်ဘာလ 20, 1994) ။ အထက်တန်းကျောင်းမိန်းကလေးငယ်များသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးငယ်နှင့်အတူ "ရက်စွဲများ" ဝယ်ယူအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအပေါ်အဘယ်သူမျှမထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူအတော်များများယောက်ျား (Enda 2001) ။ ဒီဖြစ်စဉ်မှတုံ့ပြန်မှုများတွင်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏တန်ဖိုးကိုလည်းအမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားတိုးပွားလာ (JASE 2007) ။ ဆက်ဆံရေးအားလုံးသည်အမျိုးအစားများ, ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား, ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်လိင်ကနေအထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့အခြား, အလွန်အားကောင်းတဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာ, ဒီကာလ၌တုန်လှုပ်ခဲ့ကြသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် PC များ၏ပြန့်ပွားသည်ဤရှုပ်ထွေးပြောင်းကုန်ပြီအလယ်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒါဟာနှစ်လယ်ပိုင်း 2000s မှတဆင့်စောစောမိုဘိုင်းဖုန်းများထောက်ခံအားကောင်းအင်တာနက်ကိုခေတ်မတိုင်မီစတင်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူလိုက်ပါသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ activated သောအချစ်ဇာတ်လမ်းစန်းတိုးမြှင်ကပြောသည်နိုင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုအလွန်လူငယ်များ၏လူမှုဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့နှင့်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင် (JASE လူတွေကိုအကြားဆက်သွယ်ရေးရာထူးတိုး 2007, 65-72) ။
အင်တာနက်လျင်မြန်စွာလူသိများလာပြီး, လူမှုရေး segments များနှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးစည်းရုံးကိုလည်းလူတွေကွာဟတဲ့အတွက်တစ်ဦးဝိုးတဝါးအသိဆောင်ခဲ့လေ၏။ ထိုကြောင့်ကွာဟတဲ့အတွက်၏, ငယ်ရွယ်လူတွေစိတ်အားထက်သန်စွာမေတ္တာတော်ကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ မတ်ေတာ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကြိုးစားခဲ့ခဲ့ကြသည်: စင်ကြယ်သောမေတ္တာ, မျိုးစုံမေတ္တာ, ပြဇာတ်အဖြစ်မတ်ေတာ, ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ်ချစ်ခြင်း, ဒါပေါ်မှာ (Tanimoto 2008).
အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြား, "မေတ္တာလိင်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်" ထင်သူအချိုးအစားသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်အမျိုးသမီးငယ် JASE (ထိုမိန်းမတို့သည်သေချာပေါက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘို့အလိုငှါလိင်ဆက်ဆံချင်ကြဘူးလျှင်ပင်မေတ္တာစိတ်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ထိုသူတို့အဘို့သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြသူတို့ရဲ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့တော်မှာ 2007, 87) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့ကြသောအမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ရာခိုင်နှုန်း 1999 မှတဆင့် 2005 ထံမှတိုးလာ (JASE 2007, 15) ။10
မိုဘိုင်းဖုန်းများ, စုံတွဲများအကြားဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းတိုးလာရငျးနှီးရာထူးတိုးနှင့်ဆက်ဆံရေးအရှိန်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကိုနမ်းရှုပ်ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီးနဲ့အစောပိုင်းမတိုင်မီထက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ (JASE 2007, 72-76) ။
ဂျပန်မှာတော့မိုဘိုင်းဖုန်းများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အခြားကြင်နာရာထူးတိုး။ ယခုနှစ် 2000 ပတ်လည်ကြော်ငြာနှင့်ညှိနှိုင်း "လျော်ကြေးချိန်းတွေ့" နှင့်ပြည့်တန်ဆာအဘို့အသုံးပြုတဲ့မီဒီယာလျင်မြန်စွာ fixed ဖုန်းမှမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များမှ, အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ အဆိုပါ 1990s ၏အဆုံးစွန်သောဝက်ကနေ 2000s မှတဆင့်ပိုမိုအမျိုးသမီးတွေလျော်ကြေးငွေချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုသူတို့ရဲ့ခုခံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။11 အမြိုးသမီးမြားကဤလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့ကိစ္စများတွင်မိန်းမများသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လုံးဝသေချာကြဘူး။ ကျနော်တို့ Nito (ထို 2000s မှတဆင့်, ဆင်းရဲမွဲတေမှုတှငျနထေိုငျသူမြား၏အချိုးအစားတိုးပွားလာကြောင်းအချို့အဘို့ကိုသိရ 2014) ။ သို့သော်အမည်မဖော်များနှင့်မသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်လူကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်နည်းပညာ, လျော်ကြေးချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုအားပေးအားမြှောက်သော။ သခြောလည်းမရှိ
နောက်ပိုင်းတွင်အစောပိုင်း 1990s ကနေရေရှည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွက်, ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုကျော်ကာစီးပွားရေးအားသာချက်ခံစားရန်ဆက်ပြောသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းစန်းကဒီနောက်ခံရှိသည်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့် 2000 ၏ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းပြီးနောက်, Mid-2008s အတွက်စတင်လူပျိုတို့၏အလုပ်လက်မဲ့သို့မဟုတ်မမှန်အလုပ်အကိုင်အကြီးအကျယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါအချစ်ဇာတ်လမ်းစန်းနှင့်လျော့ "အနိုင်ရတဲ့" ဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသမီးအကျိုးစီးပွား (Ushikubo 2015) ။ အဘယ်အရာကိုမိုဘိုင်းအင်တာနက်ရဲ့အာကာသအတွင်းကျန်ရစ်လျော်ကြေးငွေချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာအဘို့ကိုသာကြေငြာများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်မိုဘိုင်းစာတိုက်ပုံးများနှင့်ဂျပန်အတွက်မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုအစဉ်အမြဲလျစ်လျူရှုမရနိုငျသောပြည့်တန်ဆာ-related မက်ဆေ့ခ်ျများက ထပ်မံ. ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အလယ်ပိုင်း 2000s ကတည်းကထိုကဲ့သို့ 2-chan နှင့် Mixi အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော SNS ကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ SNS ယဉ်ကျေးမှု ပို. ပို. ပိုမိုစုံလင်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်လူငယ်များအမျိုးမျိုးပါဝင်ခဲ့။ တစ်ခုချင်းစီအသိုက်အဝန်းက၎င်း၏ထူးခြားသောဝေါဟာရ, သဒ္ဒါနှင့် esthetics ရှိပါတယ်, နှင့်သင်တန်းသားများကိုပွညျ့စုံ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ SNS ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာ-to-မျက်နှာဆက်သွယ်ရေးထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ လူများ, ပုံစံဆက်ဆံရေးသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပိုင်မှ SNS သုံးပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ဘေးဖယ်အစစ်အမှန်အမည်များကိုအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့ Facebook က, ကနေ SNS ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးအင်တာနက်ချုပ်ထားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ SNS ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံ In-လူတစ်ဦးနည်းပါးလာရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ SNS ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျများလဲလှယ်ပြီးနောက်မျက်နှာ-to-မျက်နှာတှေ့ဆုံဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏တစ်စုံတစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့, ဂျပန်, လူတို့သည်မိမိတို့စာရိုက်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွမ်းအွန်လိုင်းရတဲ့ပြီးနောက်လူတစ်ဦးအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏တစ်စုံတစ်ဦးကအစည်းအဝေး၏နှုန်းမှာပညာရေး၏မည်သည့်အဆင့် (JASE နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအကြား, 2005 ထံမှ 2011 ဖို့အကြီးအကျယ်လျော့နည်းသွား 2007, 2013) (သဖန်းသီး။ 4).
အွန်လိုင်း acqueintance ပြီးနောက်လူတစ်ဦးအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏တစ်စုံတစ်ဦးကအစည်းအဝေး၏နှုန်းထားများ 2005 မှ 2011 ကနေယုတ်လျော့
ကျွန်တော်အထက်တွင်မြင်သည်အတိုင်း, ဂျပန်လူငယ်သာအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးပိုမို Self-လုံလောက်သောဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်လူတစ်ဦးအတွက်သူတို့အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော်မူသောဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်တွန့်ဆုတ်ရှိကြ၏။
2.2 ချိန်းတွေ့ဆိုက်များနှင့် Applications ကို
ဂျပန်မှာတော့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအမျိုးမျိုး 1995 ကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ 1999 အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအပါအဝင်လူငယ်များ, လျင်မြန်စွာမိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ (Ogiue ၏အသုံးပြုသူများအဖြစ်လာခဲ့သည် 2011) ။ သူတို့ဟာကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများဖိတ်ခေါ်, အလင်း posted: "။ ကိုယ့်ယခုဖြည့်ဆည်းနိုင်သူယောက်ျားတစ်ယောက်ရှာဖွေနေ" ဒီတစ်သိသိသာသာအရေအတွက်ကိုဦးဆောင် nanpa (ချိတ်-ups), တွေ့ဆုံ, ချစ်ခြင်းရေးရာ (Ogiue 2011) ။ အဆိုပါ 1980s နှင့် 1990s ခုနှစ်တွင်, အင်တာနက်ခေတ်မတိုင်မီဆက်သွယ်သူစိမ်းဘို့ဖုန်းကို-based စနစ်များပြီးသားလူကြိုက်များတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များလျှင်မြန်စွာအင်တာနက်ကိုခေတ်၌မိမိတို့နေရာအရပ်ခေါ်သွားတယ်။ 2005, အထီးအသက်မွေးမှုကျောင်းကကျောင်းသား 12.5% မှာတော့အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 17.6 အမျိုးသမီးသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းမှကျောင်းသား%, အထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 12.1% နှင့် 6.5% သူတို့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ (JASE ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် 2007).12
သူတို့ရဲ့မိတ်ဆက်ကတည်းကဂျပန်ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များလျော်ကြေးငွေချိန်းတွေ့ရှာနေအမျိုးသမီးငယ်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကတက်ယူလျက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီများန်ထမ်းအသုံးပြုပုံရုံ 1990s အတွက်တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုနဲ့တူခဲ့ကြသည်။ 2003 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုစည်းမျဉ်းဥပဒေဥပဒေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုကြင်နာဖို့ 18 နှစ်အောက်ရှိသူများဖိတ်ခေါ်သည့်ဆိုဒ်များတားမြစ်ထား။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတွင်မှတ်ပုံတင်အခါ, အပြင်, 2008 အတွက်, ပညတ္တိကျမ်း, အသုံးပြုသူရဲ့အစစ်အမှန်အသက်အရွယ်လိုအပ်မှပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်အများပြည်သူ ID ကိုကဒ်အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြု။ ဤပညတ်တရား၏ရလဒ်အဖြစ်မြောက်မြားစွာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့လျော်ကြေးချိန်းတွေ့၏မီဒီယာအသက်အရွယ်မှတ်ပုံတင်မလိုအပ်ပါဘူးပေးသော SNS, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဂျပန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအထူးသဖြင့်ပညတ္တိကျမ်းပြင်ဆင်ချက် (Ogiue မီ, တကယ်လျော်ကြေးငွေချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာများအတွက်အခြေခံခဲ့ကြသည် 2011).
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပြည့်တန်ဆာများအတွက် pimps အဖြစ်သရုပ်ဆောင်အများအပြားတရားမဝင်ကန်ထရိုက်တာများ, sexy ပုံများ, ပရိုဖိုင်းနှင့်ရန်လိုမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူအထီးအသုံးပြုသူများအများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်, ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များပေါ်သည်ထင်ရှားပါပြီ။ အခြားအ paid က်ဘ်ဆိုက်များမှအချို့ကလမ်းညွှန်အထီးအသုံးပြုသူများသည်။ လည်းမြင့်မားသောအဖိုးအခမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. စောင့်ရှောက်ဖို့အထီးအသုံးပြုသူများကိုအားပေးရာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောင်းချသူကကို set up အများအပြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရှိခဲ့သည်။ အထီးအသုံးပြုသူများ site ရဲ့ကိုယ်ပိုင်န်ထမ်းကရေးသားအတုမက်ဆေ့ခ်ျများနေသောအမျိုးသမီးများ, ကနေအများအပြားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိသည်။ အထီးသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးမကျေနပ်ဖြစ်ကြအချိန်ကိုအသုံးပြုပုံဆိုက်ရုတ်တရက်ပိတ်, အခြားသော site ကိုဖွင့်လှစ်။
လျော်ကြေးချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာများ၏မက်ဆေ့ခ်ျများ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောင်းချသူထံမှမက်ဆေ့ခ်ျများကလွှမ်းမိုး, ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များရိပ်ရတဲ့, အကျင့်ပျက်များနှင့်ရာဇဝတ်သားအဖြစ်အစောပိုင်း 2000s အတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ 2008 အတွက်ဥပဒပြင်ဆင်ရေးနှင့်အတူချိန်းတွေ့ site ကိုကုမ္ပဏီများကအခြေခံကျကျအသက်အရွယ်ကန့်သတ်စောင့်ကြည့် pimps ဖယ်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုပုံသူတို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုတိုးတက်လာဖို့ကြိုးပမ်းမှာသူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့် unremittingly ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း (Ogiue မြှင့်တင်ရန်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျများမဖျက်ပစ် 2011).
အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားသောဆိုဒ်များနှင့် applications များချိန်းတွေ့, ဂျပန်အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း (Spracklen 2015), ကျယ်ပြန့်အတော်လေးမကြာသေးမီကအထိမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ဖူးဘူး။ အများစုမှာဂျပန်သေးဆွဲဆောင်မှု profile များကိုရေးသားခြင်းနှင့်ဖြားယောင်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းမှအသုံးမရှိကြပေ။ အများအပြားအနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များကိုအလွန်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်ပြောင်းလဲပြီ, ဒါပေမယ့်ဂျပန်၌ဤအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါမိုဘိုင်း app Tinder လည်းဂျပန်မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အဆိုပါပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း 1957 ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့်ဂျပန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုအပေါ်ခေတ်ပြိုင်ဥပဒေရေးရာန့်သတ်ချက်၏အခြေခံနျြရစျ။ ပြည့်တန်ဆာများ၏ဤပညတ်တရားရဲ့အဓိပ်ပါယျမှာဝေါဟာရကို "လိင်အင်္ဂါသွင်း" (လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤပညတ်တရားကိုလှည့်ပတ်အလုပ်လုပ်စေရန်, လိင်အင်္ဂါသွင်းပါဝင်သောမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ 1999 များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုအပေါ်ပညတ္တိကျမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းပုံစံကိုလက်ခံရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ "ပို့ဆောင်မှုကျန်းမာရေး" ဟုခေါ်တစ်ဦးကဖုန်းခေါ်မိန်းကလေးဝန်ဆောင်မှုတဖြည်းဖြည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု (Nakamura ၏အဓိကပုံစံဖြစ်လာသည် 2015a, b) ။ 2010 ခုနှစ်, 15,000 ပေးပို့ကျန်းမာရေးရုံးများထက်ပို 20,000 အတွက် 2017 ကျော်မှတိုးမြှင့်ရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစိုးရကလမ်းများပေါ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု Salon ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ 2004 ကတည်းကအများအပြား Salon (ရဲတပ်ဖွဲ့စီးနင်းမှုအပြီး Ogiue ပိတ်ပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြပြီ 2011) ။ ဤနည်းအားဖြင့်လိင်န်ဆောင်မှုများ၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အစိုးရ၏မူဝါဒသည်အနီရောင်-အလင်းခရိုင်ထုတ်ရှင်းလင်းဖို့နဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ clean up လုပ်ဖို့ခဲ့ပေမယ့်လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းမြေအောက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်အဖြစ်, လိင်လုပ်သားများကိုတောင်ပိုကြီးတဲ့အန္တရာယ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။
ဒီပြောင်းလဲမှုကအင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြန့်ပွားနှင့်အတူလက်-In-လက်သှားသောအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Delivery ကျန်းမာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီများအွန်လိုင်းကြော်ငြာအပေါ်ကြီးမားအသုံးစရိတ်များအောင်နေဖြင့်ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဓာတ်ပုံများ, ပရိုဖိုင်းကို၎င်း, လိင်လုပ်သားများပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ချက်များက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ပေါ်လာ။ ယင်းအေဂျင်စီများများ၏က်ဘ်ဆိုက်များမှယောက်ျားလမ်းပြက်ဘ်ဆိုက်များတစ်များပြားလှလည်းရှိပါတယ်။ ကောင်းသောဖောက်သည်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အရင်ကဆိုရင်လမ်းညွှန်က်ဘ်ဆိုက်များပင်ရှိပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုအပေါ်အွန်လိုင်းအချက်အလက်များ၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏဝေးစုံတွဲများနှင့်ဂျပန်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်။
Delivery ကျန်းမာရေးလိင်အင်္ဂါသွင်းထုတ်ပယ်သင့်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများကပါဝင်ပတ်သက်ပေမယ့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းပါသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခန်းတစ်ခန်း (Nakashio အတွက်အတော်လေးမကြာခဏဖြစ်ပျက် 2016).
နယူး ( "ချက်တင်မင်းသမီး" ဟုခေါ်) ထိုသို့သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူချက်တင်န်ဆောင်မှုအဖြစ်တီထွင်ပေးခဲ့သည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများပုံစံများ, အရာအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်အထီးဖောက်သည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောဆိုမှုများရှိ (Ogiue 2011, 178) ။
350,000 န်းကျင်အားလုံးတှငျအမြိုးသမီးယနေ့လိင်လုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့ကဆိုပါတယ်နေကြသည် (Nakamura 2014) ။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်ကြာမြင့်စွာကျဆင်းမှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့စီးပွားရေးအားနည်းချက်များကိုငှါ, 2000s နှင့်နောက်မှပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမျိုးသမီးအရေအတွက် 2000s အတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ယောက်ျားရဲ့စီးပွားရေးပါဝါကိုငြင်းဆန်သောကြောင့်, သို့သော်အထီးဖောက်သည်များ၏နံပါတ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစျေးနှုန်းတွေနှစ်ဦးစလုံး, တူညီတဲ့ကာလအတွင်းကျဆင်းသွားသည်။ ထိုမှတပါး, လူတို့ရှေ့မှာထက်နည်းပါးလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခဲ့သည်။ NHK က 1999 တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်းများတွင်ပိုမိုထက်သူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းယောက်ျား၏ 20% နှင့်၎င်းတို့၏သုံးဆယ်အတွင်းယောက်ျား၏ 54%, အတိတ်တစ်နှစ် (NHK အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် 2002) ။ အဘယ်သူမျှမအကြီးစားစစ်တမ်းဟာ 2000s ပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူအပေါ်ပြုမိပေမဲ့, နှုန်း 1999 ကတည်းကသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီထင်နေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြော်ငြာအင်တာနက်ပေါ်ရှိလျှံခဲ့ကြပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကိုအင်တာနက်ခေတ်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ သာအနည်းငယ်ဂျပန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စုံတွဲများလိင်အတွက်ကျဆင်းမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေပါပြီ။ သို့သော်ကျိန်းသေအင်တာနက်ကိုရေလွှမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြော်ငြာအရှင်လူတွေရဲ့အသိစိတ်လွှမ်းမိုးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်လိင်တင်ဆက်ဖို့ဆက်လက်။
ကျွန်တော်အထက်တွင်ဤသုံးပါးကဏ္ဍများမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပိုမိုနက်ရှိုင်းထိန်းသိမ်းနည်း၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဂျပန်တွင်ကမကထပြုခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်သွားရန်လူငယ်များ enabled ။ ထို့အပြင်, နည်းပညာလူငယ်များသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမှလူမှုအုပ်စုများကျော်လွန်တွေ့ဆုံတဲ့ကျယ်ပြန့်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်ကြ၏။ လျော်ကြေးချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာအဘို့တောင်းဆိုနေတာဤမျှလောက်များစွာသောမက်ဆေ့ခ်ျရှိပါတယ်ကတည်းကသို့သော်အစောပိုင်း 2000s မှယနေ့ဖို့, အင်တာနက်, စစ်မှန်သော, Non-စီးပွားဖြစ်တှေ့ဆုံရှာတွေ့ဖို့နေရာအဖြစ်မယုံကြည်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, လူငယ်၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်လိုက်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်နှုန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်စျေးကွက် (Nakamura ကျုံ့ပြီ 2014) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယောက်ျားမိန်းမတို့၏ 4.9% 20 သူတို့ SNS သို့မဟုတ် 2018 အတွက်ကိုက်ညီ applications များတဆင့်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ဆက်ဆံရေး (Rakuten အို-အသားတင်ဖူးသတင်းပို့ခဲ့ကြသည်အသက်အရွယ် 2018) ။ ဤသည်အချိုးအစားဒါကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်နည်းပညာလယ်ပိုင်း 2000 ပြီးနောက်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသတိပေးခံရရှိသည်ဟုယူဆခြင်းမရှိပါ။ ထို့ပြင်များစွာသောဂျပန်လူမျိုး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိကောင်းကောင်းကိုအလွန်ရုံဉီးနှောကျလြျှောဖှတျခွငျးကဲ့သို့စီးပွားဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပရိုမိုးရှင်းနှင့်သံသယရှိသူအင်တာနက်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများကလွှမ်းမိုးခဲ့ကြပေမည်။
လာမယ့်နှစ်ဦးကိုပုဒ်မတှငျကြှနျုပျတို့ကိုအင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို Self-လုံလောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေးပေးမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးကြနှင့်မည်သို့အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအစားထိုးခဲ့ကြပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဆွေးနွေးမှု Zimbardo နှင့် Coulombe ၏သီအိုရီအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြေစိုက် (2015), အရာသည်အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအလွန်ဒါအပေါ်ယောက်ျားရဲ့အရငျးနှီးဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ပညာ၏ interdisciplinary နှင့်ပြည့်စုံသောဆွေးနွေးမှုအတွင်းလိင်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်စွမ်း, လူမှုဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်အယှက်အလေးအနက်ဆိုသည်။ သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လက်ရှိအခြေအနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်ကျနော်တို့အခြေအနေကဂျပန်တော်တော်များများလူမှုရေးအခြေအနေများကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားကြောင်းထိန်းသိမ်းရန်။
အင်တာနက်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဖြေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းညစ်ညမ်းမီဒီယာပါဝငျသညျ။ (Spracklen အဖြစ်2015ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တစ်ကိုယ်ရေအပန်းဖြေမှုအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဂျပန်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အနှစ် ၄၀ ကျော်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ကိုဂရုတစိုက်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမှသည်၎င်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအထိ၊ လိင်အင်္ဂါ၏ရုပ်ပုံများကိုအလွန်အမင်း pixillating မှ၎င်းတို့အားပေါ့ပေါ့တန်တန် pixelating အထိ၊ လိင်မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းအထိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည် ပိုမို၍ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုရှင်းလင်းလာခဲ့သည်။ ငှားရမ်းသောဗီဒီယိုစတိုးဆိုင်အရေအတွက်သည် ၁၉၉၀ အစောပိုင်းအထိသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့ပြီးစျေးကွက်သည်အထူးသဖြင့် ၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၂ အထိတိုးတက်ခဲ့သည် 2009) ။ အဲဒီအခြိနျမှာစျေးကွက်၏အရွယ်အစားတစ်နှစ်လျှင် 300 ဘီလီယံယန်း (Nakamura ဖြစ်ပြောဆို 2015a), အခါ, ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်နှင့်အပြင်းစွာသောအပြိုင်ဆိုင်မှုရှိ၏။ 1995 န်းကျင်စတင်ခြင်း, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဒီစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် ၃ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသောဗီဒီယိုများကိုပြသထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်တာနက် porn ၏စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည် (Ogiue 2011) ။ ထိုမှတပါး, 2000 အတွက်ပေါ်တယ်ဆိုဒ်များအများအပြားအသစ်က porn ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ကြောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လည်းကြီးမား porn ကွန်ရက် (Ogiue ဖွဲ့စည်းများစွာသောနမူနာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် 2011, 153) ။ အွန်လိုင်း porn ၌ဤဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအလွန်ညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲ; က ပို. လက်လှမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အရှင်ပိုပြီးမကြာခဏ, အတွေ့အကြုံ။13 တိကျမှုစစ်တမ်းကိုဒေတာမရရှိနိုင်ပေမယ့်စုံတွဲများကိုအတူတကွညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့အတှကျအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိမတူပဲ, ဂျပန်၌အလွန်ရှားပါးလျက်ရှိ၏ လူတို့သညျအများအားဖြင့်လျှို့ဝှက်ချက်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့နေဖြင့်စောင့်ကြည့်။ ဤသည်ဂျပန် porn အတွက်အစွန်းရောက်အကြောင်းအရာမြင့်တက်ခြင်းနှင့်စုံတွဲများလိင်အတွက်ကျဆင်းမှုနောက်ကွယ်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
နှောင်းပိုင်း 2000s အတွက်ကြောင့်အခမဲ့ video-ခွဲဝေမှုန်ဆောင်မှုများ, paid ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အပျော်တမ်း porn ရုပ်ရှင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းအွန်လိုင်း posted နှင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ရရှိနိုင်ကြ၏။ ပိုပြီးလူတွေ browsing အတွက်နှင့်အတူအခမဲ့-အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရန်ခဲ့သည် (Ogiue 2011).
အခမဲ့ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေခြင်းတွင်နည်းပညာအပြောင်းအလဲများနှင့်အပြင်းအထန်ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီရုပ်ရှင်၏အရှည်အလွန်တိုတောင်းသောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီကလူ့စာရွက်စာတမ်းများ၊ သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရပ်များဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောဗီဒီယိုရှည်များရှိသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့အများစုသည်အလွန်တိုတောင်းလာသည်။ ၅ မိနစ်ခန့်သာကြာသည်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သုက်ပိုးစီးနိုင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်များတွင်ဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဆက်နွယ်မှုများအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမရှိတော့ပါ။ မင်းသမီး၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအများအားဖြင့်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးယနေ့တိုင်ထိုအတိုင်းမြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်များသည်ငွေနှင့်လူကြိုက်များမှုကြောင့်ရရှိသောကြောင့်မိန်းမပျိုများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းစိတ်အားထက်သန်စွာ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ကင်းထောက်များသည်ညစ်ညမ်းသောမင်းသမီးအသစ်များကိုရန်လိုစွာရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမျိုးအစားများကိုပိုမို segment ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေကယောက်ျားတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်အကြားတွင်ပိုမိုဆိုးရွားလှသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကိုအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲခဲ့သည် (Ogiue 2011) ။ ဤကာလအတွင်းညစ်ညမ်းအပေါ်မည်သည့်လူမှုရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံသို့မဟုတ်ဝေဖန်မှုများခဲရှိ၏။ အဲဒီအစား, တိုကျိုဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနှင့်အာဏာရပါတီ၏ရှေးရိုးစွဲတပ်ဖွဲ့တွေအပြင်းအထန် "ကျော်လွန်လိင်ပညာရေး" အဖြစ်တစ်အချို့ကျောင်းတွင်အသေးစိတ်လိင်ပညာရေးဝေဖန်နှင့်လိင်ပညာရေးအပေါ်သိသိသာသာပြန်ခုတ်ဖြတ်။
အဆိုပါညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများအထီးအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းလှုံ့ဆော်မှုမိတ်ဆက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်း, အထီးဗဟိုပြုရှုမွငျခချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ ဂျပန်မှာတော့ယောက်ျားအများစုနေတဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းနှင့်ရံဖန်ရံခါ porn စောင့်နေကြလော့။ ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင် contents တွေကိုအထီးတန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်း, တစ်ခုတည်းရှုထောင့်ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမုဒိမ်းမှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု (သီတင်းပါတ် 2011) ရုပ်ရှင်အခြေအနေတွေမှာဒုတိယသဘောသဘာဝဖြစ်လာသည်။ အစွန်းရောက်ရုပ်ရှင်ခုနှစ်, မင်းသမီးအဓမ္မပြုကျင့်ခံရစဉ်လိင်တုံ့ပြန်; အဆိုပါမင်းသမီးဟာသူတို့ရဲ့ယောနိသို့ထည့်သွင်းမည်သည့်အရာဝတ္ထု, ဒါမှမဟုတ်ပင်သေးငယ်တဲ့လူနေမှုတိရိစ္ဆာန်များမှလိင်တုံ့ပြန်ကြသည်။ မင်းသမီးလေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်သယ်။14 သို့သျောလညျးဝေးအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အဖြစ်မှန်ကနေဖယ်ရှားပစ်သောဤပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု, ယောက်ျားအမျိုးသမီးလိင်အကြောင်းကိုအလေးအနက်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းပေးပါ။ သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေပဲ tools များ (Spracklen ဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားရဲ့စိတ်အတွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကယုံကြည်ချက်ဖန်တီး 2015, 184) ။ Zimbaldo နှင့် Coulombe တို့က“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထီးကျန်ဖြစ်နေသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများသည်လက်တွေ့ဘ ၀ ၌လိင်မှုဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများတစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောလူငယ်များအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ကြသည်။ & Coulombe 2015, 30) ။ ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်သည်ဂျပန်လူငယ်များအတွက်မှန်ကန်သည်။
ထို့အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်အပေါ်နီးပါးမျှလူမှုရေး၏ဝေဖန်မှုသို့မဟုတ်ပညာရေးရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူများကိုလည်းညစ်ညမ်းလျစ်လျူရှုကဝေဖန်ကြပြီမဟုတ်။ များစွာသောလူလျှို့ဝှက်ချက်ထဲမှာညစ်ညမ်း watch အဖြစ်, သူတို့ကလူထုထဲမှာဆှေးနှေးဖို့ချီတုံချတုံ။ ထို့ကြောင့်, ညစ်ညမ်းလူမှုရေးဟောပြောချက်သို့မဟုတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာမထားပါဘူး, ထိုသို့မညီကြောင်းဘာသာရပ်ဖြစ်နေဆဲပင်။
ဒါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၌ထင်ရှားခဲ့သူမင်းသမီးတစ်ဦးသိသိသာသာအရေအတွက်ကငွေညှစ်ခဲ့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တို့, နုံအမျိုးသမီးတွေကန်ထရိုက်သို့လှည့်ဖြားခြင်းနှင့်ခိုင်းခဲ့သည်။ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များနှင့်အတူခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် unwillingly ယင်းဇာတ်ကား၌ထငျရှားခဲ့သညျ။ အတော်များများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ထိတွေ့လည်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကသူတို့ရဲ့ porn ပုံနဲ့ရုပ်ရှင်၏အဆမဲ့ပြန့်ပွားခြင်းမှခံစားခဲ့ရခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလေးနက်သောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏စိတ်နှင့်အလောင်းများကိုဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, နောက်ဆုံးတော့ 2016 အတွက်လူမှုရေးပြဿနာ (Miyamoto အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရ 2016; Nakamura 2017) ။ Setsuko Miyamoto ခန့် 200 အမျိုးသမီးတွေကထောက်ခံ "ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပျက်စီးခြင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏ပွားဘို့အုပ်စု" ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, ဖော်ပြထား: "လူ့အတွေးအခေါ်နည်းပညာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားမထားပါဘူး" (Nakamura 2017) ။ လူ့အခွင့်အရေးအခုဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင် (လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းက 2016), နှင့်အစိုးရစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးခိုင်ခံ့စေ၏။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတော်များများကစီစဉ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ မည်သူမဆိုအဘယ်သူမျှမဖျက်ပစ်နိုင်, အင်တာနက်ပေါ်ရှိအဆိုပါရုပ်ရှင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ယခင်မင်းသမီး၏ဆင်းရဲဒုက္ခရင်းမြစ်များမှာပင်လျှင်မူကား, ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ် upload တင်လို့ရပါတယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အခြေအနေကရှင်သန်မှု၏အန္တရာယ်ဖြစ်လာပေမယ့်ထားပါတယ် သူတို့ကို။
အတော်များများကယောက်ျားလိင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်ကဤအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကိုအသုံးပြုပါ။ 2011 အတွက် JASE စစ်တမ်းများတွင်အထီးအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသား 14.9% နှင့်အထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 40.7% သူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင် (JASE ကနေလိင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြောင်းတုန့်ပြန် 2013) ။ ယောက်ျားကိုလည်းမသိစိတ်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏ပညာရှိများနှင့်တန်ဖိုးများကို Internalize အတွင်း။15
လုလင်တို့သည်ရဲ့စိတ်နှင့်အလောင်းအဘယ်သူ၏ contents တွေကိုပု 2000s အတွက်ခက်ခဲများနှင့်မိန်းမတို့အားအကြမ်းဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ဤအမှန်တကယ်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏ဤလောကသို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်များတွင်အမျိုးသမီးများကိုအလွယ်တကူယောက်ျားသူတို့အလိုရှိကြသည်တွင်အပျော်အပါးပေးပါ။ သို့သော်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတွေမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံဖို့ပိုတွန့်ဆုတ်ပြနာကျင်မှုခံစားရစေခြင်းငှါ, ပင်မျှမပြောပါလိမ့်မည်။ အများစုမှာယောက်ျားအစစ်အမှန်အသက်တာ၌တုံ့ပြန်မှုဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ အများစုမှာဂျပန်စုံတွဲများမိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများနှင့် ပတ်သက်. အလုံအလောက်မဆက်သွယ်ကြပါ။ ရလဒ်အဖြစ်, များစွာသောလူတို့သညျသူတို့အညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့အစစ်အမှန်လိင်မလိုအပ်ပါဘူးကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းဂျပန်တွင်အစစ်အမှန်လိင် supplanting ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်အနည်းငယ်အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့မရှိခြင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်လျှို့ဝှက်စွာညစ်ညမ်းကြည့်နေကြကြောင်းအကြံဉာဏ်ကိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှတိုင်ကြား။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ဘယ်လိုမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှုအပေါ်ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်စိတ်ပညာ၏လယ်ကွင်းအတွင်းသုတေသနမိတ်ဆက်ခြင်းလူသားမြားသညျဤဖြစ်ရပ်၏ယန္တရားရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်သက်ရောက်သည်။ Zimbardo နှင့် Coulombe, ဟူသောဝေါဟာရကိုသုံးပြီး "နည်းပညာဗဒေ" Zimbardo နှင့် Coulombe (နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနရလဒ်များကဉျြးခြုပျ 2015။ Ch.11) ကအာဏာအရှိဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါ, ဦးနှောက်, အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှတဆင့်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုခြင်းကိုသည်းခံ။ တချို့ကအပြောင်းအလဲများကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ဆင်တူနေသည်။ အစပိုင်းမှာ porn ကနေဆွ dopamine လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အစိုက်ထူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တဦးတည်းရဲ့ဦးနှောက်ကိုဆွပေးမှနေသားတကျဖြစ်လာအဖြစ်ဒါပေမယ့် dopamine ပမာဏကိုဆွ၏အသစ်များပုံစံများကိုလိုအပ်, လျော့နည်းစေပါသည်။
အဆိုပါတုန်လှုပ်ဖွယ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုအွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခံရဖို့ဆက်လက်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုစတင်ခြင်းသတိထားမိဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ဖြတ်သန်းအဖြစ်, စိုက်ထူ porn ၏ဆွခြင်းမရှိဘဲထိန်းသိမ်းထားနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ရောက်ရှိပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်မက်စ်ပျဉ်ပြားအင်စတီကျုအားဖြင့်သုတေသနပြုလုပ် porn အသုံးပြုမှုကိုလည်းဦးနှောက်-ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောထိုဒေသတွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏လျှော့ချရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှောက်လျော့နည်းအဖြစ်, နှစ်ဦးစလုံး dopamine နဲ့ dopamine receptors လျှော့ချနေကြသည်။ ထိုသို့ ပို. ပို. ဆွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (Zimbardo နှင့် Coulombe မှတဆင့်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထင်နေသည် 2015) ။ ငါတို့သည်ဤဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသုတေသနနှင့်အသစ်နှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနလုပ်ငန်းကိုအလွန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ရလဒ်အများပြည်သူအသိပညာဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Next ကိုကျနော်တို့မိန်းမတို့အဘို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အကျိုးဆက်များမှာကြည့်ပါ။ ညစ်ညမ်းအပျော်အပါးကြုံနေရ၏အမျိုးသမီးအခွင့်အလမ်းလျော့ကျစေပါတယ်။ ကျွန်မတက္ကသိုလ်သင်ပေးသကဲ့သို့ငါမကြာခဏသူတို့ရဲ့ရည်းစားညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုတုပဖို့လိုဝေဖန်ခံရအမျိုးသမီးကျောင်းသားများကိုနားထောင်ကြလော့။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရည်းစားသူတို့နှင့်အတူသိပ်ကြမ်းတမ်းကြောင့်သူတို့နာကျင်မှုတွေ့ကြုံခံစားပြောကြပါတယ်။ လုလင်တို့သည်ညစ်ညမ်းများ၏အစွန်းရောက်နည်းစနစ်ကိုအတုယူမှရှောင်ကြဉ်လျှင်ပင်, သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ" (Balon နဲ့ Segraves နားမလည်ဘူး 2009) ။ အမြိုးသမီးပျော်မွေ့ခြင်းမရှိရ, ဒါကြောင့်သူတို့လိင်ဆက်ဆံစိတ်ဝင်စားကြောင်းရှုံးသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်း (JFPA 2017) ၏အဆိုအရ, လိင်အဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်ရှိခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးအကျိုးစီးပွား (ပုံအောက်ပါအတိုင်း။ 5) ။ 20-24 အသက်မိန်းမတို့အဘို့, 2008 သူတို့ "ကိုပိုမိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းစိတ်ဝင်စား" ၏အချိုးအစားတဖြည်းဖြည်းယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်သူတို့ "မဟုတ်အများကြီးစိတ်ဝင်စား + မပေးစိတ်ဝင်စား၏ကတည်းက" မသက်ဆိုင် "အမျိုးအစားတို့၏စီးပွါးနှင့်ကျဆင်းခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်, မသိပေမယ့် မှာအားလုံး "တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကိုမျှအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသေးထွက် caried ပါပြီ။ သို့သော်ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံအတွက်အမျိုးသမီးအကျိုးစီးပွားကျဆင်းမှုယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ကြောင်း hypothesize ။
Clear ကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုတှေ့မွငျမရနိုငျ, ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံစိတ်ဝင်စားမဟုတ်သော 20-24 အမျိုးသမီးတွေ 2008 ကတည်းကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာ
porn နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း actresses အဖြစ်ကျနော်တို့ (Ogiue အတိအကျတစ်နှစ်လျှင်ဂျပန်တွင်ထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအရေအတွက်, ဒါပေမယ့် 10,000 ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လုပ်ခံရဖို့ကဆိုပါတယ်နေကြပြီး, 3000 အမျိုးသမီးတွေပွဲဦးထွက်မဆုံးဖြတ်နိုင် 2011) ။ ဤမျှလောက်များစွာသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်, စျေးကွက်အရွယ်အစား 50 ခန့် 60 အတွက်ဘီလီယံယန်းတစ်ဦးမျှသာငါးပုံတစ်ပုံဈေးကွက်၏အရွယ်အစား 2017 မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2000 မှကျုံ့ထားသည်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်ဆက်လက်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်စျေးကွက်ယခုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းမငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုကြကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ JASE မှတစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်“ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း” နှင့်“ အရွယ်ရောက်ပြီးသောဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း” နှင့်“ အင်တာနက်ပေါ်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်များကိုကြည့်ခြင်း” ၏အတွေ့အကြုံများကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အင်တာနက်ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ၊ ရောင်းချသော (သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများထံမှချေးယူထားသော DVD) ရောင်းချရန်အတွက် DVD များ (သို့) DVD များငှားရမ်းခြင်း။ သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌အင်တာနက်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်လာပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည် DVD ညစ်ညမ်းမှုကိုလုံးဝဖုံးကွယ်ထားသည့်အခါ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ ၇၈.၈% သည်“ အင်တာနက်ပေါ်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်” ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ ၉၂.၂% သည်“ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်” ၁၂ နှစ်အတွင်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့လာသောအခါ ၁၃.၄% ကျဆင်းသွားသည်။
အဆိုပါကျဆင်းခြင်းအမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား ပို. ပင်ဖြစ်ပါသည်။ 1999 ခုနှစ်, 50.3% နှင့် 2011 အတွက် 23.6% "အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြည့်ရှုအားပေးအရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များ," 26.7% တစ်ကျဆင်းမှု "အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုများ, စောင့်ကြည့်" ။ 1999 များတွင်အများဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုများပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်လျော့နည်းအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာခဲ့ပေမယ့် 2011 ကတည်းကအကြောင်းအရာခက်ခဲပြီးပိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်လာသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုကြည့်ရှုပေါ်တက်ပေးသောဆိုပါစို့နိုင်ပါတယ်။16
စိတ်ဝင်စားစရာခွဲခြားစိတ်ဖြာ17 ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုမရ porn သာကိုအားနည်းစွာအငယ်တန်းမြင့်မားသောကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြား "ပျော်စရာမဟုတ်" နှင့် "ညစ်ပတ်" အဖြစ်လိင်တစ်အနုတ်လက္ခဏာပုံရိပ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်တစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုမရအကြားဆက်ဆံရေး, နှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့် အမျိုးသမီးနှင့်သူ 1999, 2005 နှင့် 2011 စစ်တမ်းများနှင့်အတူနီးပါးတူညီမျှလိင်အတွေ့အကြုံရှိသည် (Harihara 2018, 117-122) ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤရလဒ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်မသိရပါဘူးပေမယ့်, ငါတို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအချို့သောလူငယ်များအဘို့တုန်လှုပ်ဖွယ်များနှင့်လက်မခံနိုင်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကကြည့်ရှုရှောင်ရှား, လိင်တစ်အနုတ်လက္ခဏာ image ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကနေသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးစောင့်ရှောက်သောဆိုပါစို့နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်18 လူတွေညစ်ညမ်းရှောင်ရှားစေခြင်းငှါ, ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပေါ်။ တချို့ကလူတို့သညျအကွမျးဖများနှင့်အထီးဗဟိုပြုအကြောင်းအရာမုန်းပေလိမ့်မည်။ တနည်းလူဟာအချို့သောအမျိုးအစားကျနော်တို့လာမယ့်အပိုင်းအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တံ့သော, ဒါပေါ်မှာ animations တွေကို, ဂိမ်းများနှင့်ထဲမှာဇာတ်ကောင်သို့သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုလောင်းလိမ့်မယ်။
2.5 ၏စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ့ဖလား Otaku Entertainment က
ထိုကဲ့သို့သော animations တွေကို, manga ကို, နှင့်ဂိမ်းများအဖြစ်ထူးခြားတဲ့နှင့်ဖြစ်မည်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်လုပ်ကြသူများသည်ဟုခေါ်ကြသည် otaku. Otaku ယဉ်ကျေးမှုပြန်လည် 1970s မှစတငျ။ အစောပိုင်း 1980s လူမျိုး၏ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဇာတ်ကောင်တွေနဲ့စွဲလမ်းနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမြင်တော်မူ၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပြ၏ပုံဆွဲစတိုင်ကာတွန်းနှင့် manga ကိုအတွက်လုံးဝအသစ်သောသင်္ကေတကိုယ်စားပြုဖို့ Photo-တူသောလက်တွေ့ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုကနေဖက်ပြောင်း, 1983 ပတ်လည်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုခံယူ။ ထို့ကြောင့်သင်္ကေတကာ၏အသစ်တခုပုံစံ (Otsuka မိတ်ဆက်ခဲ့သည် 2004) ။ ထို့နောက် 1990s အတွက်ပရိသတ်ကိုကြီးမားတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Animation ရဲ့ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူခံဝင်နှင့်အတူဇာတ်ကောင်၏လောကဓာတ်ကိုဖန်ဆင်း, အခစျြ otaku လူတွေ။
Otaku လူတွေကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရပ်ရွာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၏အဓိပ္ပါယ် otaku နှင့်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ otaku ယဉ်ကျေးမှုအရှည် (Tagawa မှာဆှေးနှေးခဲ့ကြပြီ 2009) ။ ကျနော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်သူကိုစိတ်ရောဂါ Tamaki Saito ၏အမြင်ကိုထောကျပံ့ otaku လိင်သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (Saito အားဖြင့်လူတွေ 2006) ။ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် otaku များစွာသောအမျိုးအစားများအပေါ်အခြေခံပြီး otaku ယဉ်ကျေးမှု, ဒါပေမဲ့ဒီစက္ကူ animations တွေကို, manga ကို, နှင့်ဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ကျော် obsessive သူကလူအပေါ်အာရုံစိုက်။
အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ရဲ့ကျက်သရေခြင်းဖြင့်ယစ်နေကြသည်သူများသည်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌၎င်းတို့၏ချစ်ရာသခင်သည်အကျင့်စာရိတ္တကိုထိဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သူမ၏ဆွဲ, သူမ၏ကုန်သွယ် purchasing, သူမ၏စိတ်ကူးယဉ်, အကျင့်အတွက်သူမ၏ပုံကိုကြည့်ပျော်မွေ့လျက်, သူတို့ချစ်ခင်ဖော်ပြသူမ၏အကြောင်းကိုပုံပြင်များရေးသားခြင်း။ တိုက်ရိုက်ထိမိခြင်းကိုဘယ်တော့မှနိုင်သူတစ်ဦးဇာတ်ကောင်မေတ္တာရှင်ဟုခေါ်သည် moe နှင့်တဦးတည်းရဲ့ပထမဦးဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆင်တူဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်း သို့ဖြစ်. , အားလုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင် moe တစ်ဦးနုရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန် (Hotta ရှိ 2005) ။ စင်ကြယ်သောကတည်းက otaku လူတို့သညျအပျိုကညာသူတို့ကိုယ်သူတို့များမှာသူတို့ရဲ့စံပြအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ကောင်းစွာအပျိုကညာဖြစ်ချင် (Nakamura 2015a, b).
1996 အတွက်စျေးကွက်အပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့သော DVD ကို၏လျင်မြန်စွာပြန့်ပွား, အမျိုးသမီး anime ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူစွဲမက်ယောက်ျား၏နံပါတ်အတွက်တိုးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ CGI နည်းပညာကိုလည်းတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဇာတ်ကောင်များ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုပိုမိုတိကျစွာသူတို့ရဲ့အယူခံတိုးမြှင့်, ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
ကွန်ပျူတာဂိမ်းသည်ပထမဦးဆုံးမေတ္တာတုပခြင်းဂိမ်း 1994 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်နှင့်တပြိုင်နက်အကြီးအလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. အများအပြား otaku လူရဲ့နှလုံးသားများမေတ္တာခြင်း simulation ဂိမ်းအားဖြင့်ယစ်ခဲ့ကြသည်။19 ဂိမ်းထဲမှာ (ပုံ။ 6), သူတို့က, ကစားသမားများ၏ရှုထောငျ့မှလှပတဲ့မိန်းကလေးဇာတ်ကောင်ရင်ဆိုင်ရသူမ၏ပုံပြင်နားထောင်နှင့်သူ၏အဖော်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အဆိုပါကစားသမား Animation နဲ့ Mangas ထက်ဂိမ်းထဲမှာအချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။20 သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အဖြစ်ရိပ်မိပေမယ့်တကယ်သာမိမိတို့၏ပြည်တွင်းရေးပေးတဲ့ dialog (Hotta သောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ကြသည် 2005). Otaku အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ဤအမျိုးအစားသည်ဦးနှောက်အချစ်ဇာတ်လမ်းဟုခေါ်သည်, ထိုသို့နေတုန်းပဲလိင်စိတ်နိုးထမှုနိုင်သည်ယောက်ျားတစ်ဦးနှစ်ဦး-ရှုထောင်ဇာတ်ကောင်မဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူနေမှုလူတစ်ဦးကိုချစ်။ သူတို့လူတို့နှင့်အတူရင်ခုန်စရာတွေ့ဆုံဖို့လစျြလြူရှုနေကြသည်ကတည်းကသူတို့လူ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုညံ့ဖျင်းသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ဂရုစိုက်ကြပါဘူး။ အချို့သော otaku ယောက်ျားအတိအကျအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ shaped ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်သူမ၏ပုံနှင့်အတူခေါင်းအုံးခြော့ (သဖန်းသီး။ 7)။ တချို့ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်ဇာတ်ကောင် (ပုံ featuring ကုန်စည်အမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိပ်ခန်းကိုအလှဆင်။ 8).
စမတ်ဖုန်းအွန်လိုင်း RPG "အခြားရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများ" (2016) (Appliv အခြားရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများ)
ဇာတ်ကောင်များ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလှဆင်တစ်ဦးကအချို့သော Otaku ရဲ့အခန်းတစ်ခန်း
လှပသော-မိန်းကလေးဂိမ်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအနက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းလည်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုမှာတော့ကလေး-မျက်နှာဇာတ်ကောင်ကတော့ဂိမ်းကစား '' စစ်ဆင်ရေးပေါ် မူတည်. , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါဂိမ်းကစားအပြင်းအထန်အပြန်အလှန်ပေါ်မူတည်သည့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်, မတူဘဲဒီလောကကိုစွဲလန်းနှစ်သက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, တစ်ချိန်ကဤလောကသို့ရေးဆွဲနည်းနည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူပျိုတို့, ခဲအစဉ်အဆက်ကနေလွတ်မြောက်။
Otaku ယဉ်ကျေးမှုအများအားအစစ်အမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းထံမှထွက်ကျဆင်းသွားသူတွေကိုများအတွက်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ပြီး, ထိုသို့မကြာခဏ၏ပျော်စရာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှပထမတစ်ချက်မှာအမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်ကနေ otaku ဖျော်ဖြေရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ၏ရိုးရှင်းအကြောင်းမရှိဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သို့သျောလညျး၏, ဒိုင်းနမစ် otaku ဖျော်ဖြေရေးက၎င်း၏နောက်လိုက်လိင်တစ်ဦးပျော်ရွှင်ချဉ်းကပ်မှုရှိသည်အကြံပြုသော Element အပါအဝင်အလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ၏အမျိုးမျိုးသောဒြပ်စင်မှာပိုပြီးဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောကြောင့် otaku လိင်ကိုရည်မှတ်ဖျော်ဖြေရေး။
Koki Azuma ၏အရေးပါမှုကိုမှတ်ချက်ပြုသူသြဇာစာရေးဆရာမ otaku ယဉ်ကျေးမှု, မိန်းကလေးဂိမ်းလိုပဲအလုပ်လုပ်ကြောင်းစောဒကတက်သည် Bildungsroman ထိုလူငယ်အမျိုးသားများမှ။ ဤရွေ့ကားဂိမ်း "Pseudo-ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုအလေးပေးနှင့်ကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကြုံတွေ့ရ, အချစ်ဇာတ်လမ်းရှိသည်, အတှေ့အကွုံဆုတ်ယုတ်မှုများနှင့်ဂိမ်းကစားမှတဆင့်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားဖြစ်လာ" (Azuma 2007, 311) ။ ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ပကနေစောငျ့ရှောကျအမျှကျနော်တို့သောကြီးထွားလျစ်လျူရှုမထားသင့် otaku ယောက်ျားပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းခံစားရသည်။
Mitsunari Oizumi ၏ပါဝင်သူလေ့လာရေးအတွက်စေ့စပ်ထားပြီး otaku (မူလ) မဟုတ်သောအရာအဖြစ် ၁၀ နှစ်ကျော်otaku လူတစ်ဦးနှင့်များ၏ရှုပ်ထွေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် otaku။ မိမိအစကားပြန်ခုနှစ်, otaku သူမသာ "ဣတ္များအတွက်ညျ" ဒါပေမယ့်လည်း "ပုလ်ကိုမုန်း၏။ " ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားသည်လှပသောမိန်းကလေးဇာတ်ကောင်နဲ့မေတ္တာ၌တည်ရှိ၏ Otaku ယောက်ျားယောက်ျားရဲ့လိင်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ခြင်းသညျးမခံနိုငျသညျ။ သူအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြထားတယ် otaku အဖြစ်ကြင်နာပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ယောက်ျား။ Oizumi အကြောင်း, နောက်ထပ် Jungian စိတ်ပညာလျှောက်ထား, ဒီလိုဖော်ပြထား otaku အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တို့၏မတ်ေတာသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်တတ်၏ထားတဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့သို့ "anima" ပေါင်းစပ့်လမ်း, (Oizumi ဖြစ်ပါသည် 2017).
ယခင်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ကဂျပန်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏အထီးဗဟိုပြုအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးမပြုတဲ့သူလူငယ်များ၏တိုးပွားလာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ porn ကိုမသုံးကြဘူးသူလူပျိုတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင် otaku အကြမ်းဖက်ပုလ်မကြိုက်သူကိုယောက်ျား, သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုကသဘာဝဖြစ်ပြီးလိင်တစ်ဦးအပြုသဘောပိုမိုလူသားဆန်စွာချဉ်းကပ်ညွှန်ပြပုံရသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိသည်။ ၏ဦးနှောက်ထဲမှာမသာဒီပိုပွီးလူသားလိင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ် otaku ယောက်ျားပေမယ့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးအတွက်? ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်, ငါတို့၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည် otaku ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်နှင့်များ၏သမိုင်းပြောင်းကုန်ပြီ otaku.
Hibiki Okura (2011) အင်တာဗျူး otaku နောက်ကျောကသူတို့ဆယ်ကျော်သက်အတွေ့အကြုံများမှချိန်းတွေ့, သူတို့ရဲ့လိင်သဘာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်ဘယ်လိုစကားတွေ, 1980 န်းကျင်ဘွားမြင်သောယောက်ျား။ Okura အဆိုအရ, otaku ယောက်ျားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာအမျိုးအစား otaku "ဒါဟာရည်းစားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါကရည်းစားရှိသည်ဖို့အမှန်တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းဖူးဘူး, ဒါကြောင့်ငါတဦးတည်းဤမျှလောက်ချင်ကြပါဘူး။ " "ငါအချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကို": ။ ကဲ့သို့သောလူကိုဖန်ဆင်းမှတ်ချက်များ "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်လုံလောက်သောကောင်းလှ၏။ " ရှိလျှင်၎င်းတို့သည်, အစစ်အမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအနည်းငယ်သာရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ထက်ကဤနည်းသည်ကိုတနျဖိုး otaku ဝါသနာ။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့က "အမှန်တကယ်ကနေလွတ်မြောက်" ဒါပေမယ့်လက်တွေ့တွင်သာအနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြပါဘူး။
၏အခြားအမျိုးအစား otaku "ကျွန်မနေတဲ့ရည်းစားရှိသည်ဖို့လိုခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မရဲ့အထက်တန်းကျောင်းလက်ထက်၌ထိုအခွင့်အလမ်းလွဲချော်။ " "ငါကရည်းစားချင်ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အောက်ပါငါ၏အဝါသနာသိမ်းထားချင်" ဤသူတို့သညျအဘို့မိမိတို့ preference ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစား: ယောက်ျားဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်, သို့မဟုတ်အင်တာနက်ဂိမ်းများနှင့်စစ်မှန်သောအချစ်ဆက်ဆံရေးဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားကြိုးစားပါ။ ဒီသုတေသနအရဤနှစ်မျိုးအကြားခြားနားချက်ကိုသူတို့ပြီးသားဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းရှိမရှိကလွှမ်းမိုးနေသည် otaku ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြင်ပမှာနေထိုင်ခဲ့ဖူး otaku အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောကာလအတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ယဉ်ကျေးမှု, ။ ပြင်ပကသူတို့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သုံးစွဲသူများသည် otaku ယဉ်ကျေးမှုတူညီတဲ့အသက်အရွယ်နှင့်လိင်၏မိတ်ဆွေများကသူတို့တွင်မေတ္တာနှင့်လိင်များ၏လက်တွေ့ဘဝနှင့် ပတ်သက်. ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပေးရန်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေမတ်ေတာ၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင်ယူမှုနည်းစနစ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်တွေ့ရှိရပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူတွေပြီးသားအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာခဲ့သူ otaku မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ယဉ်ကျေးမှု Okura (ကောငျးစှာမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကိုအကြား Animation နဲ့ဂိမ်း၏အကြောင်းအရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ, လူအပေါင်းတို့မှာအစစ်အမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်လိင်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါဘူး 2011) ။ ဤရလဒ်၏လိင်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရည်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောကာလအဲဒီမှာသူဖြစ်ရမည်ကြောင်းအကြံပြု otaku.
Otaku လူများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုကာလ (Harada ထဲမှာ, 2000s အတွက်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည် 2015) ။ ပထမဦးဆုံးကာလ, 2000 ထံမှ 2005 ဖို့ပဲဒီဗီဒီပြန့်နှံ့ရာနှင့် CGI ရဲ့အရည်အသွေးသည်အလွန်တိုးတက်လာသည်။ အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များ၏တိကျသောပုံဖော်တင်ဆက်၏စိမ်းလန်းဖို့ဦးဆောင် moe ယဉ်ကျေးမှု။ အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးကာလ၏အဆုံးစွန်သောဝက်အတွင်း, Animation ဖြန့်ဖြူးဘို့မီဒီယာအင်တာနက်ဒီဗီဒီကနေအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, otaku လူတို့သညျလူမှုရေးဆက်သွယ်မှုရရှိခဲ့နှင့်မြို့ကြီးများရှိဖြစ်ရပ်များမှာစုဝေးစေတော်မူ၏။ Otaku အမျိုးသမီးတွေလည်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနှင့်မွို့၌စုဝေးစေတော်မူ၏။21
ဒုတိယကာလ 2000s ၏အဆုံးစွန်သောဝက်အတွင်းစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတန်ဖိုးများနှင့်အပြုအမူများ otaku ယဉ်ကျေးမှု "ပေါ့ပါး" ဖြစ်လာသည်နှင့်သာမန်ပြည်သူများအကြားနယ်နိမိတ်နှင့် otaku လျော့။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Animation, manga ကို, နှင့်ဂိမ်းများအတော်လေးလူကြိုက်များဝါသနာဖြစ်လာခဲ့သည်။ Otaku ယဉ်ကျေးမှုတစ်နိုင်ငံလုံးသော်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဂုဏ်သတင်းကိုသာရရှိမှုခဲ့သည်။ Akihabara ၏တိုကျိုရပ်ကွက်အတွင်း၏ပထဝီစင်တာ otaku ယဉ်ကျေးမှု, မည်သူမဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့်အကျွမ်းတဝင်လေထုနဲ့အပန်းဖြေအစက်အပြောက်သို့ (2005 ၌) အသစ်တခုရထားလမ်းဖွင့်ပွဲအားဖြင့်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်များ၏အရောင်များထည့်သွင်း, 2008 ဖွင့်လှစ် Nico Nico Movie, ကိုခေါ် influencial ဖိုင်တင်ခြင်းက်ဘ်ဆိုက် otaku ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လျှင်မြန်စွာလူငယ်များအကြားရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်။ မေလ 48 အတွက် Akihabara မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံမှာသူတို့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းသောရုပ်တုကိုမိန်းကလေးအုပ်စုတစ်စု AKB2005, ကိုလည်းအမျိုးသားရေးအချည်းနှီးသက်သက်အဖြစ်လူကြိုက်များရရှိခဲ့ရုံဒေသခံမဟုတ် otaku အချည်းနှီးသက်သက်။ အဆိုပါအုပ်စုသည်တမင်တကာကိုအင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအသက်အရွယ်၌ကား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးကပ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုအပေါ်အာရုံစိုက်။
အချို့မှာအစိတ်အပိုင်းများ otaku ယဉ်ကျေးမှုကို (2000s ၏အဆုံးစွန်သောတစ်ဝက်ကတည်းကဒီယဉ်ကျေးမှုကနေဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှ Harada ပြီ 2015) ။ 1990 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုပစ်မှတ်ထားနှစ်ခုအစက်အပြောက် (Suginami တိုကျိုမြို့ရှိမြို့နှင့် Ehime စီရင်စုအတွင်းရှိ Matsuyama ၏ဒေသဆိုင်ရာမြို့) တွင် 2005, 2009, 2015 နှင့် 20 အတွက်ကောက်ယူအဆိုပါစစ်တမ်းများ, လူများ၏ရာခိုင်နှုန်း "ရုပ်ပြရွေးချယ်ရာတွင်ကြောင်းပြသ နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးတွေမှာတသမတ်တည်းတိုးမြှင့်အရေးအပါဆုံးဝါသနာ "" သူတို့ရဲ့အဖြစ် ", ကာတွန်း, ဂိမ်းများ, ပျင်းရိကျက်စား။ အဆိုပါပေါင်းစပ်မှုနှုန်း 2.7့1990% ခဲ့ပေမယ့် Suginami အတွက်%, 10.5% နှင့် 10.4% 20.6 ဖို့နဲ့အသီးသီး 14.8, 16.0 နှင့် 24.9 အတွက် Matsuyama အတွက်%, 2005% နှင့် 2009% 2015 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ otaku ယဉ်ကျေးမှုအမြင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူမြားပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါသည်။ တူညီသောစစ်တမ်းများတွင်လူဦး "နဲ့တူတစ်ခုခုသူ otaku"-light otaku13.4 သာ 1990% -comprised နှင့် Suginami အတွက်%, 46.8% နှင့် 59.4% 53.3 ရန်နှင့် Matsuyama အတွက်%, 36.0% နှင့် 50.0% 53.3 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအစက်အပြောက်, တသမတ်တည်းတိုးမြှင့်နှုန်းထားနှင့်တိုကျိုမြို့တော်နှင့်ဒေသခံမြို့ပျောက်ကွယ်သွားအကြားကွာဟချက်၌တည်၏။ ယနေ့ 2015 အတွက်ပိုပြီး 20 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ထက်ဝက်ထက်မှဆွဲဆောင်နေကြတယ် otaku က "အလင်း" preference ကို (Tsuji et al အပါအဝင်ယဉ်ကျေးမှု, ။ 2016).
အလင်း otaku Harada (လူတွေမရောမနှောနတေတျသောသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကို communicators မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုသူအချို့တို့သည်စစ်မှန်သောဘဝမိတ်ဖက်နှင့်အတူရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးရှိ 2015) ။ သူတို့နှစ်ဦးကိုရှုထောင်ဂိမ်းသို့မဟုတ် animations တွေမှာအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်အားဖြင့်ဆွဲဆောင်လျှင်သို့သော်သူတို့မရှိတော့အစစ်အမှန်ဘဝဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစူးစိုက်။ လက်တွေ့တွင်တစ်ခုကာတွန်းဇာတ်ကောင်များနှင့်အမှန်တကယ်လူတစ်ဦး၏မတ်ေတာ၏ကို virtual မေတ္တာတော်ကိုမလွှဲမရှောင်ပဋိပက္ခအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖယ်ထုတ်။ ဂိမ်းများအတွက်ကြော်ငြာ "အခြားရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများ" ကဤသို့ဆို၏: (Appliv-အခြားရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများ) "ဤဂိမ်းတွင်စစ်မှန်သောရည်းစားရှိပြီးသူများအတွက်တားမြစ်သည်" ဂိမ်းကတစ်စုံတစ်ဦးသည်သူ၏ကို real-ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါဒါဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်ကြောင်းအကြံပြု ရည်းစား။ ယေဘုယျအားဖြင့်, otaku စစ်မှန်သောဘဝမိန်းကလေးလိုခငျြတဲ့သူယောက်ျားနှစ်ဦးကိုမဟာဗျူဟာများရှိသည်။ တဦးတည်းကသူတို့နားလည်သောမိန်းမတို့ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည် otaku preference ကိုနှင့်အခြားသောမိန်းကလေးရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏ဖုံးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် otaku သူတို့ထံမှ preference ကို (Harada 2015) ။ ယခင်မဟာဗျူဟာအောင်မြင်ဖို့ခဲဖွယ်ရှိသည်, မိမိတို့ preference ကိုရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းထိတွေ့ခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်အဖြစ်အဆုံးစွန်, ကိုလိုက်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။22 မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့ virtual world / အချစ်ဇာတ်လမ်း / လိင်နှိုင်းယှဉ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင် / အချစ်ဇာတ်လမ်း / လိင်၏ dichotomy အမှန်တကယ်အဖြစ်အတော်လေးအားနည်းနေဖြစ်လာသည်ပုံ otaku ယဉ်ကျေးမှုလျော့နည်းပြင်းထန်သောဖြစ်လာသည်။
Otaku ကျွန်တော်မြင်သည်အတိုင်းလိင်, အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တွင် otaku ယဉ်ကျေးမှုလျော့နည်းပြင်းထန်သောဖြစ်လာသည်နှင့် otaku ယောက်ျားမိန်းကလေးရှိခြင်းပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ငါတို့သည်အထက်တွင်တချို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း otaku ယောက်ျားအကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောပုလ်မုန်းနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ချဉ်းကပ်နည်းယူပါ။ ယခုငါတို့ဆက်ဆံရေးမှပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူလိင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်အဘယျသို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်စဉ်းစားရန်လိုပါသည်။ ကျနော်တို့ဒီအလားအလာဟာလက်ရှိဂျပန်လိင်များ၏အခက်အခဲများမှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့တလမ်းတည်းကြောင်းအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်နှင့်ထင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့် otaku ယောက်ျားဤမျှလောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြမ်းဖက်အထီးဗဟိုပြုညစ်ညမ်းအပြည့်အဝကြောင်းဖြစ်ထင်နေသည်ပုလ်ကိုမုန်း။ ညစ်ညမ်းတိုးခြင်းနှင့်လူဦးအပေါ်လူမှုရေးဟောပြောချက်သည်၎င်း၏စာလုံးပေါင်းအောက်မှာမကျဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောညစ်ညမ်းသည်၎င်း၏အာဏာကိုဆုံးရှုံးလျက်, ဦးမည် otaku ပုလ်၏မုန်းတီးမှုလည်းညှိုးနွမ်းပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏မျက်နှာစာဆက်စပ်မှုတွေနှင့် 2000 ကတည်းကဂျပန်၌လူငယ်များ၏လိင်၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုငါပေးပြီ။ ဤခေါင်းစဉ်ခဲဂျပန်တွင်ပညာသင်နှစ်လေ့လာမှုများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသို့မဟုတ်စစ်တမ်းများဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သညျဤစာတမ်းတွင်ပွုပါပွီတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ jigsaw ပဟေဠိ၏အပိုင်းပိုင်းအားမရတူတစ်ခုခုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သေးမမြင်ရနိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်နေစဉ်အလုံးစုံရုပ်ပုံ, ရေးမြင်ကြပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြုံငုံရုပ်ပုံဆုပ်ကိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါမှသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ၏အခြားဖြစ်နိုင်ခြေအချက်များများ၏ယူဆချက်ဆွေးနွေးရန်ကိုလည်းဖြေရှင်းချက်အကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ်။ အဆုံးမှာကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်လိင်အကြားဆက်ဆံရေး၏လယ်ပြင်တွင်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများထောက်ပြချင်ပါတယ်။
2000 ကတည်းကအင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတိုးတက်မှုများကလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေးနှစ်ခုကျယ်ပြန့် domains များမှရယူပေးပြီ။ တစ်ခုမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားသော Animation နဲ့ဂိမ်းထဲမှာအချစ်ဇာတ်လမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးဤနှစ်ခုပုံစံများ၏တိုးတက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, Mid-2000s ကတည်းကဂျပန်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ၏အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းလက်တွေ့နှင့်အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးလုံးဝအထီးဗဟိုပြုရူပါရုံကိုအတူယောက်ျားများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးလိင်ဆက်ဆံပိုမိုအခက်အခဲကြုံတွေ့ကြပါပြီ။ Animation နဲ့ဂိမ်းရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအပေါ်အခြေခံပြီး Entertainment ကယောက်ျားရဲ့လိင်နဲ့ပိုရှုပ်ထွေးဆက်စပ်မှုတွေရှိပါတယ်။
တစ်ခုစိုက်ထူစတင်ဘယ်မှာဇီဝကမ္မစကားပြော, လူတို့သညျအဘို့အဦးနှောက်ဒါအထီးလိင်အမြင်အာရုံ-ဦးနှောက်ဆွဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထီးဦးနှောက်ကိုလည်းပိုမိုလွယ်ကူစွာအမျိုးသမီးဦးနှောက် (Zimbardo နှင့် Coulombe ထက်အင်တာနက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအပေါ်မှီခိုဖြစ်လာနိုင် 2015) ။ ဤသည်ဇီဝကမ္မယန္တရားကျွန်တော်တို့ကိုဒီနည်းပညာအသစ်အထီးလိင်အတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့ဘယ်လိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်။
ဤပြောင်းလဲမှု, ဆိုးရွားအလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်တာ၌ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားကြသူလူငယ်များ, စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်အနာဂတျအကွောငျးစိုးရိမ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရာရာမှာပျက်ကွက်ကိုကြောက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာစိတ်ဖိစီးမှုအသက်တာ၏ပြင်းထန်သောအခြေအနေများပေးအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်၏ကြွယ်ဝသောနှင့်လေးနက်ကမ်ဘာပျေါတှငျစိတျဝငျစားမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကအွန်လိုင်းငုံ။ လူပျို၏နံပါတ်များကိုတိုးမြှင့နှင့်များစွာသောအစစ်အမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်လိင်အပေါ်၎င်းတို့၏ကျောလှည့်ဒီစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာသို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။23
ဂျပန်မှာတော့ကအင်တာနက်ကိုလည်းလျော်ကြေးချိန်းတွေ့, ပြည့်တန်ဆာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂျပန်မှာတော့လိင်ပိုင်းန်ဆောင်မှုကြော်ငြာကိုအင်တာနက်ဆိုက်များ, ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များအပြင်, ကြီးမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ Website များ esthetically နှစ်သက်, သှေးဆောငျ, အခွား, High-ဘတ်ဂျက်ဘဏ်ဍာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် applications များအတွက်, SNS ၌၎င်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမေးလ်ထဲမှာနေရာတိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာဖြစ်ထင်နေသည်။ မကြာခဏဤအပရိုမိုးရှင်းထိတွေ့နေသောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အကြောင်းကိုနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းရပါလိမ့်မယ်။ အတူတူလုပျတဲ့သူအမြိုးသမီးလိင်ဆက်ဆံနှင့်လိင်မုန်းကြလိမ့်မည်မှလစျြလြူရှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ယောက်ျားညစ်ညမ်းအပေါ်ပိုပြီးမှီခိုကြနှင့်ပိုပြီးအမျိုးသမီးများကိုလိင်မှလစျြလြူရှုဖြစ်လာကတစ်အနုတ်လက္ခဏာစှဲဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ဒါဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်နိုငျသညျ။
Zimbaldo ထောက်ပြအဖြစ်, အင်တာနက်နည်းပညာကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများရန်, ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ယူဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီနည်းပညာလည်းမိန်းမတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်း hypothesize ။ ငါအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အယူအဆဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အလယ်ပိုင်း 2000s ကတည်းကအမျိုးသမီးများသည် ပို. ပို. ထိုကဲ့သို့သောက "ပျော်စရာမဟုတ်" သို့မဟုတ် "အဆင်းလှခြင်းမရှိ" ကြောင်းကိုအဖြစ်လိင်၏အနုတ်လက္ခဏာတွေ့ကြုံ, ဖော်ပြပြီ (Harihara 2018) ။ ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်သေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ကြသည်။ လိင်ကိုကြောက်အမျိုးသမီးငယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ၏ Are, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အထီးစိတ်ကူးယဉ်လွန်းကြီးမားသောအကြားကွာဟချက်ပါသလဲ ယောက်ျား porn ကိုတုပဖို့လေ့ရှိသောကြောင့်သို့မဟုတ်ထိုသို့ပြုသလော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသဘောပေါက်နေတယ်ဆိုရင်, ဘယ်လိုနည်းပညာအသစ်များ၏မြေတပြင်လုံးရုပ်ပုံလိင်ခက်ခဲပိုပြီးရှင်းလင်းစွာရေးဆွဲပါလိမ့်မည်စေသည်။
ဂျပန်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းစိတ်ကျရောဂါကိုအမြဲပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း, လူအခြို့လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အတူကျေနပ်မှုရှိပါသလဲ, ဒါပေမယ့်အများကြီးလူငယ်များအခွအေနခံစားနေရပြီးနှင့်ထွက်ပေါက်ရှာကြသည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအောက်ပါဖြေရှင်းချက်စဉ်းစားစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါတစ်ခုရှုပ်ထွေးမူဘောင်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ဒါဖြေရှင်းချက်ရှာတွေ့ရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးအကြံပြုချက်များအနှစ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံးအထောက်ခံချက်ကျယ်စကေးပြည့်စုံလိင်ပညာရေးကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်တွင်လူအတော်များများနေဆဲဤမျှလောက်များစွာသောကြောင့်ပညာရေးသို့ညစ်ညမ်းထည့်သွင်းကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်, လိင်ပညာရေးကိုတှနျးလှနျ, ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလိင် conflate ။ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်တာဝန်ခံယူနိုင်ရန်အခြေခံအသိပညာနှင့်အတွေးအခေါ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ဂျပန်ကလူသာလတ်တလောတွင်အသစ်နည်းပညာများအားဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်လိင်မှအပြောင်းအလဲကိုထိတွေ့ပါပြီ။ ကလေးများအနေဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများမှအသီးအသီးအသက်အရွယ်အုပ်စုဘက်စုံလိင်ပညာရေး, အရေးအပါဆုံးဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယထောက်ခံချက်လိင်အပေါ်လူမှုရေးဟောပြောချက်မြှင့်တင်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်ပြိုင်ဂျပန်မှာတော့လိင်-related မီဒီယာအများစုယောက်ျားရဲ့မီဒီယာနှင့်အမျိုးသမီးမီဒီယာသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ဒါဟာမသက်ဆိုင်ကျား၏, လူတိုင်းဖွင့်လှစ်လူမှုရေးဟောပြောချက်၏ဖိုရမ်များထိုသို့သောညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းအဖြစ်လိင်များစွာသောပြဿနာများကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ပေသည်။
တတိယထောက်ခံချက်လိင်အပေါ်ကိုပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသနနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့လိင်၏ကိစ္စရပ်များကိုလူမှုဗေဒအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောဆေးပညာ, စိတ်ပညာ, ဇီဝြဖစ်စဉ်, သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမနုဿဗေဒကဲ့သို့သောအခြားပညာရေးဆိုင်ရာလယ်ကွင်းထဲမှာမသာ, မညီကြောင်းကြပြီ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနအပေါ်ကပထမနှင့်ဒုတိယအချက်များကိုပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ပေသည်။
အများပြည်သူ porn ၏အသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုများ၏သိပ္ပံနည်းကျအသိပညာရရှိနိုင်လျှင်စတုတ္ထ, အစားကထိန်းညှိဖို့ကြိုးစားနေထက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရည်မှတ်, ကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အမှန်တကယ်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာသက်ရောက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, သူတို့ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော MakeLoveNotPorn အဖြစ်အုပ်စုများ၏လှုပ်ရှားမှုများ (MakeLoveNotPorn.tv), Cindy ကဆုန်ပေါက်ပြေးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအပြင်ဂျပန်ထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
နည်းပညာသူ့ဟာသူဆိုသဘောအရလိင်၏အခွအေနေဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုအစားဖြစ်ပျက်နည်းပညာ၏တိကျသောပုံစံများကိုလိင်၏တိကျသောအခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, သူတို့သည်သီးခြားလူမှုရေး, စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းအတွက်အပြန်အလှန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရလဒ်အဖြစ်နည်းပညာ၏ပုံစံများနှင့်လိင်များ၏အခြေအနေများအသွင်ပြောင်းနေကြသည်။ သည်အခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်နည်းပညာ၏ပုံစံများ, လိင်များ၏အခြေအနေနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့, စီးပွားရေး, လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းကြှနျုပျတို့သညျဤစာတမ်းတွင်တွေ့မြင်သောအရာကိုအနေဖြင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်ဤကိစ်စတှငျဂျပန်အချို့ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် features တွေထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။ များစွာသောမိန်းမလျော်ကြေးငွေချိန်းတွေ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပေါ်ထွက်ကြောင်းဂျပန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်လိင်များ၏ဆက်စပ်မှုတွေအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည့်ဂျပန်-တိကျတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွင်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ထိုလူငယ်မျိုးဆက်ဆိုးရွားအခြေအနေများတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအလွယ်တကူအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပျော်စရာ-ဖြည့်စိတ်ကူးယဉ်လောကသို့စိတ်ကျရောဂါခံခဲ့ရသောလူငယ်များဦးဆောင်သည့်တိကျသောစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ နည်းပညာ၏တိကျသောပုံစံများ, အဘယျသို့လိင်များ၏တိကျသောအခြေအနေများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဘာတိကျတဲ့အခင်းအကျင်းဖြစ်ကြ၏အဘယျသို့သျောလညျး, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်လိင်အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပန်းဖြေလေ့လာမှုများအတွက် cross-ယဉ်ကျေးမှုနှိုင်းယှဉ်သုတေသနပြုသည်ဤတိကျတဲ့ features တွေသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အင်တာနက်တိုးတက်မှုသိသိသာသာသူတို့တွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးမြှင့်တင်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤအလူနည်းစုအပေါ်သုတေသနပြုဒေတာချို့တဲ့သောကွောငျ့, ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့လိင်ကွဲအများစုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကန့်သတ်ရကြမည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်လိင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံအသင်းက“ လိင်မှုကိစ္စ” ကိုအောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည် -“ နာမကျန်းခြင်းကဲ့သို့သောတိကျသောအကြောင်းပြချက်များကိုအသိအမှတ်မပြုသော်လည်း၊ တစ်လကျော်အကြာလိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရသေးသော၊ နောင်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်” (ဟူသောဝေါဟာရကို၏ JSSS Defenition "sexless").
စစ်တမ်းဒေတာ Araki et al (ချို့တဲ့သော, ဒါပေမယ့် extramarital လိင်လည်းတိုးလာကြပါပြီဟုလျှောက်သည်။ 2016).
မေတ္တာသည်အိမ်ထောင်ရေးအတွက် 1980s အားဖြင့်ဂျပန်တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာပြီးနှင့် 1990s ထဲမှာလိင်ပါဝင်သည်မတ်ေတာဆက်ဆံရေး၏နံပါတ်ရှိခြင်းပြီးနောက်အိမ်ထောင်ပြုလာပြီတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုလိုက်လျှောက်ရန်ဘုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသည်သူကိုလူငယ်များကယနေ့လက်ထပ်ရန်သို့မဟုတ်မိဘများဖြစ်လာဖို့အလွန်နည်းပါးတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအများအပြားလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်မတူဘဲတစ်ဖက်ကိုရှာတွေ့ဂျပန်အတွက်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ ခေတ်သစ်ဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများက ပို. ပို. အဆင်ပြေတစ်ခုတည်းနေဖို့လုပ်နေပါတယ်။
ဤစာတမ်းထဲမှာ, ဝေါဟာရကို "တက္ကသိုလ်" လေးနှစ်ကောလိပ်များပါဝင်သည်။
1974 မှ 2011 ကနေဒေတာတွေကိုအဘို့, JASE (ed ။ ) ကိုကြည့်ပါ။ (2013) ။ 2017 ၏ဒေတာအဘို့, JASE ကြည့်ပါ။ (2018).
အကြီးအကျယ်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာများကို“ အားလပ်ရက်များ၌ ၂ နာရီကျော်ကြာသောကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုသောသူ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်အလွန်အမင်းအသုံးပြုသူများဖြစ်သည် (JASE) 2007, 60) ။
2005 တဝိုက်တိုင်အောင်, PC များယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော desktops တွေနဲ့အဖြစ်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ယူနစ် ရှိ. , PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့မိမိတို့စာသင်ခုံမှာထိုင်ရတယ်။ ကသည်းခံနိုင်တဲ့သူကိုလူတွေက PC များ၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ပိုပြီးမလှုပ်မရှားလာတယ်, ဒါကြောင့်မခံနိုင်သူတွေကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုတက်ကြွနျြရစျ။ အရှင်စက်ကိုဖွင့်ဝိသေသလက္ခဏာများလူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများများမှဤကာလအတွင်းလူနေမှုအတွက်ဌာနခွဲစေ၏။ အဆိုပါ 2000s ၏အဆုံးစွန်သောဝက်အတွင်းပိုမိုပေါ့ပါး PC များနှင့် Wi-Fi ၏ပြန့်ပွားခြင်း၏နိဒါန်းဒီ polarization ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဂျပန်တွင်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုသမိုင်းကြောင်း (Koyano ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ထားပါတယ် 2007) pre-ခေတ်မီခေတ်ည, တန်ဆာအိပ်မက်ကမ္ဘာကြီးစဉ်းစားခဲ့ကြ, သူနှင့်ဆင်းရဲသောမိသားစုများအနေဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်သူကိုပြည့်တန်ဆာအပေါ်ကိုငုံ့ကြည့်တော့မှခဲ့ကြသည်။ ခေတ်မီအဖြစ်လူတို့တွင်ပြန့်နှံ့ပြည့်တန်ဆာဆီသို့အထင်အမြင်သေး, လိင်၏အနောက်တိုင်းစံချိန်စံညွှန်းဆောင်ခဲ့လေ၏။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုမကြာသေးမီက, ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဆီသို့တစ်ဦးထက်ပိုဒဏ်ခံသဘောထားကိုလူငယ်များကြားတွင်စင်ပေါ်ပြန်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
2011 အတွက်လာမယ့်စစ်တမ်းများတွင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမမေးခှနျးတှေမေးမွနျးခဲ့သညျ။ ထို့ကြောင့်, နှုန်းထားများအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီလေ့လာတွေ့ရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ညစ်ညမ်း၏ရေလွှမ်းမိုးသောနေသော်လည်း, သာဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူအနည်းငယ်သိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့ပါပြီ။ ညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏ဤဖော်ပြချက်နေ့စဉ်လူမှုဘဝ၌ရေးသားသူရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်နာမည်ကြီးညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်ကြယ်တစ်ပွင့်က“ ရုပ်ရှင်တွေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါဘာမှမခံစားရဘူး။ ဘာမှမ ပျော်စရာ၊ ပျော်စရာလိုခံစားမှုမရှိဘူး။ ညစ်ညမ်းတဲ့မင်းသမီးလုပ်သင့်တဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တာ” (Nakamura) 2017).
Akan Hotaru, အငြိမ်းစားညစ်ညမ်းမင်းသမီး, "ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုတုပဖို့မနေပါနဲ့" ဖျောတဲ့လူမှုရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ကိစ္စညှိနှိုင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
အလယ်ပိုင်း 2010s ကတည်းကမိန်းမတို့အဘို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ဂျပန်တွင်လုပ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်မျှမတို့စစ်တမ်းခေါင်းစဉ်အပေါ်ပြုမိခဲ့ပြီးသော်လည်းအပြုအမူကြည့်ရှု, ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပေမည်။
Harihara hierarchical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။
ပညာရေးနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနမိန်းမောသည့်ညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်သို့မဟုတ်ဂျပန်တွင်လူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင်ဂျပန် porn ရုပ်ရှင်ကိုတရုတ်နှင့်အခြားအာရှစျေးကွက်ရေလွှမ်းခဲ့ကြပြီးအလှနျအာရှလူငယ် (Nakamura 2015) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်နှင့်အပြုအမူ impact ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာခုနှစ်, လိင်အပေါ်သုတေသနပြုဂျပန်၌ရှိသကဲ့သို့နည်းတူဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဖြစ်ပြီး, လူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဏ်တိကျစွာပညာရှင်များနှင့်သိပ္ပံလေ့လာဘဲအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကလိုအပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ, အင်တာနက်ကိုနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအာရှနိုင်ငံများအတွင်းလိင်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သုတေသနထင်ပါတယ်။
သူတို့ကအစ, အဆင်းလှ-မိန်းကလေးဂိမ်းဟုခေါ်ကြသည်သို့မဟုတ် moe ဂိမ်း။
2018 အတွက်အသစ်ဂိမ်းတစ်ခု VR ယန္တရားနှင့်အတူကစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပါဝင်ပတ်သက်မှုအများကြီးနက်ရှိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ၏အများဆိုင်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ "အခြားရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများ2။ " (အခြားရွေးချယ်စရာ Girls2 ပြည်သူ့ site ကို)
အမျိုးသမီး၏လိင် otaku ထို့အပြင်အရေးပါသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကာသန့်အသတ်များအခြားစက္ကူ၌ဤအတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
အကွံဉာဏျက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အမျိုးသမီးများသည်တခါတရံသူတို့က sexy ရာထူးအတွက် anime ဇာတ်ကောင်မိမိခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ရည်းစား '' လျှို့ဝှက်ချက်အရွယ်ရောက်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုရှာတွေ့မှတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေကြသည်ဟုထဲမှာရေးလိုက်, သူတို့ကဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာမသိရပါဘူး။ လူတို့သညျလိမ်ခံရဖို့စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့တွေးမိ။
ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ငယ်ရွယ် incels (အတင်းအဓမ္မ celibates) လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ MGTOW (မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် Way ကို Going အမျိုးသားများအတွက်) ၏ယဉ်ကျေးမှုပြန့်ပွားနေကြသည်။ သူတို့ဟာပါမယ်အမျိုးသမီးတွေဆီသို့ biased လူ့အဖွဲ့အစည်းမှအတိုက်အခံအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထားကြ၏။ အနည်းငယ်သောမိန်းမတို့အပေါ်ကလဲ့စားချေယူနိုငျသညျ။ ထိုအတောအတွင်းအမှန်တကယ်မိတ်ဖက်မရှိဘဲစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနေသောဂျပန်လူငယ်များပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်အဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးက Cross-ယဉ်ကျေးမှုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုပြုရပါမည်။
အခြားရွေးချယ်စရာ Girls2 ပြည်သူ့ site ကို။ https://lp.alterna.amebagames.com/။ 18 သြဂုတ် 2018 ဝင်ရောက်။
Appliv အခြားရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများ။ https://app-liv.jp/1100088261/။ 18 သြဂုတ် 2018 ဝင်ရောက်။
Araki, C တို့, Ishida, M. , & Okawa, R. (2016) ။ Sekkusuresu Jidai မျှ Chukonen SEI Hakusyo။ Harunosora ။Google Scholar
Asano, တီ (2006) ။ Wakamono မျှ Genzai ။ T. Asano ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), Kensyo: Wakamono မျှ Henbou။ Keiso Shobo ။Google Scholar
Attwood, အက်ဖ် (2018) ။ လိင်မီဒီယာ။ Polity ။Google Scholar
Azuma, K. (2007) ။ Gehmu teki Riarizumu မျှ Tanjou။ Kodansya ။Google Scholar
Balon, R. , & Segraves, RT ကို (2009) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး။Google Scholar
(2011) ဖွဲ့စည်းခြင်းအိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရုံးစစ်တမ်း။ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa22/marriage_family/pdf/gaiyo/press.pdf။ 10 သြဂုတ် 2018 ဝင်ရောက်။
Enda, K. (2001) ။ Darega Dareni နာနီ-wo Urunoka။ Kansei Gakuin University က။Google Scholar
Fujiki, တီ (2009) ။ Adaruto Bideo Kakumei shi။ Gentousha ။Google Scholar
Futakata, R. (2006) ။ အဘယ်သူမျှမ Konnichiteki Tsukiaikata Wakamono မှ Medhia ။ T. Asano ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), Kensyo: Wakamono မျှ Henbou။ Keiso Shobo ။Google Scholar
Genda, Y. (2010) ။ Ningen ni Kaku wa နိုင်။ Minerva Shobo ။Google Scholar
Genda, Y. , & Saito, J. (2007) ။ လိင်အဘယ်သူမျှမ Aida မှ Shigoto။ Asahi Shinbun ။Google Scholar
Harada, Y. (2015) ။ ရှင် Otaku Keizai။ Asahi Shinbun ။Google Scholar
Harihara, အမ် (2018) ။ SEI ni Taisuru Hiteiteki Image ကို Sono Haikei ရန်မ Zouka ။ Y. Hayashi ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), အဘယ်သူမျှမ Sekoudou wa Dou Kawatte Kitaka Seishonen။ Minerva Shobo ။Google Scholar
Hekma, G. အ, & Giami, အေ (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး။ Palgrave ။Google Scholar
ဟွန်ဒါ, တီ (2005) ။ Moeru Otoko။ Chikuma Shobo ။Google Scholar
Hotta, ဂျေ (2005) ။ မိုးမိုးဂျပန်။ Kodansha ။Google Scholar
အခုတော့လူ့အခွင့်အရေး (2016) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအားဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအပေါ်သုတေသနအစီရင်ခံစာ: အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ. http://hrn.or.jp/news/6600/။ 25 သြဂုတ် 2018 ဝင်ရောက်။
JAFP (မိသားစုစီမံကိန်း၏ဂျပန်အစည်းအရုံး) ။ (2017) ။ ဒိုင် 8 kai Danjo Ishiki ni Kansuru Chosa Hokokusyo ရန်မ Seikatu ။ တွင် JAFP.Google Scholar
JASE (Ed က။ ) ။ (2007) ။ Wakamono မျှ SEI Hakusyo ဒိုင်6kai Chosa Hokokusyo။ Shogakukan ။Google Scholar
JASE (Ed က။ ) ။ (2013) ။ Wakamono မျှ SEI Hakusho ဒိုင်7kai Chosa Hokokusyo။ Shogakukan ။Google Scholar
JASE ။ (2018) ။ အဘယ်သူမျှမ Seikoudou ဒိုင် 8 kai Chosa Hokokusyo Seishonen။ JASE ။Google Scholar
JSSS (လိင်သိပ္ပံဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်း) "sexless" ဟူသောဝေါဟာရကို၏အဓိပ္ပာယ်။ http://www14.plala.or.jp/jsss/counseling/sexless.html။ 30 သြဂုတ် 2018 ဝင်ရောက်။
Katase, K. (2018) ။ 21seiki ni okeru Shinmitsusei မျှ Henyo ။ Y. Hayashi ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), အဘယ်သူမျှမ Sekoudou wa Dou Kawatte Kitaka Seishonen။ Minerva Shobo ။Google Scholar
kon, ဗြဲ (2001) ။ Deai-kei Jidai မျှ Renai Shakaigaku။ အကောင်းဆုံး Shinsho ။Google Scholar
Koyano, အေ (2007) ။ ဟွန်း Baisyun ရှီ။ Shinchosha ။Google Scholar
Kumazawa, အမ် (2018) ။ Karoushi / Karoujisatu မျှ Gendai shi။ Iwanami ။Google Scholar
MakeLoveNotPorn.tv ။ https://makelovenotporn.tv/pages/about/how_this_works။ 15 နိုဝင်ဘာ 2018 ဝင်ရောက်။
Miyamoto, အက်စ် (2016) ။ Kyouyousareta Kanojotati wo AV စနစ် Shutsuen။ Chikuma Shobo ။Google Scholar
Nakamura, အေ (2014) ။ နိပွန်မပါ Fuzokujo။ Shinchosha ။Google Scholar
Nakamura, အေ (2015a) ။ AV စနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျှမ Shogeki။ Shogakkan ။Google Scholar
Nakamura, အေ (2015b) ။ repo Chunen Dotei။ Gentosha ။Google Scholar
Nakamura, အေ (2017) ။ AV စနစ် Joyu Syometsu။ Gentosha ။Google Scholar
Nakashio, C. (2016) ။ Fuzokujo toiu ikikata။ Kobunsha ။Google Scholar
လူဦးရေနှင့်လူမှုလုံခြုံရေးသုတေသနအမျိုးသား Institute မှ: မွေးဖွားခြင်း Trends အပေါ်အခြေခံစစ်တမ်း။ http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html။ 25 သြဂုတ် 2018 ဝင်ရောက်။
NHK Nihonjinno SEI purojekuto ။ (2002) ။ Ninohjinno seikoudou / seiisiki NHK Syuppan ။Google Scholar
Nito, Y. (2014) ။ Joshikousei မျှ Ura Shakai။ Kobunsha ။Google Scholar
Ogiue, C. (2011) ။ လိင်မီဒီယာ 30 nen ရှီ။ Chikuma Shobo ။Google Scholar
Oizumi, အမ် (2017) ။ Otaku Towa Nanika? ရှိဒါ။Google Scholar
Okubo, Y. , Hataya, K. , & Omiya, T. (2006) ။ 30dai Mikon Otoko။ NHK Shuppan ။Google Scholar
Okura, အိပ်ချ် (2011) ။ Gendai ဟွန်း ni မျှလိင် Keisei nitsuite Jakunen Dansei okeru ။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာရောင်ပြန်ဟပ်, 32 တိုကျိုမြို့တော်တက္ကသိုလ်။Google Scholar
Otsuka, အီး (2004) ။ Otaku မျှ Seishin shi -80nendai ron။ Kodansha ။Google Scholar
Pacher, အေ (2018) ။ ခေတ်သစ်ဂျပန်စုံတွဲများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ အေ Beniwal, R. ဂျိန်း, & K. Spracklen (Eds ။ ) ၌တည်၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာကြီးများအတွက်ရုန်းကန်: တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်ထဲမှာအပန်းဖြေလေ့လာမှုများ။ Palgrave ။Google Scholar
ပြည်သူ့ဘိုးဘွားရိပ်သာ 2018 ၏ Romance နှင့်အိမ်ထောင်ရေး၏သိစိတ်ကိုပေါ်သည် Rakuten အို-အသားတင် (အိမ်ထောင်ရေး Partner နိဒါန်းဝန်ဆောင်မှုသည် Rakuten အို-အသားတင်) (20) စစ်တမ်း။ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000022091.html။ 10 ဇူလိုင် 2018 ဝင်ရောက်။
Saito, တီ (2006) ။ Sento Bisyojo မျှ Seishin Bunseki။ Chikuma Shobo ။Google Scholar
Sato, တီ, & Nagai, အေ (2010) ။ Kekkon မျှ Kabe။ Keiso Shobo ။Google Scholar
Spracklen, K. (2015) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အပန်းဖြေ, အင်တာနက်နှင့်လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှု: ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ် Communities အထောက်အထားတွေကို။ Palgrave ။Google Scholar
Tagawa, တီ (2009) ။ Otaku Bunseki မျှ Houkousei ။ တွင် နာဂိုယာ Bunridai Kiyou (Vol ။ 9) ။ နာဂိုယာ Bunridai ။Google Scholar
Takahashi, အမ် (2007) ။ Seikoudou niokeru Seishonen မှဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာအဘယ်သူမျှမ Bunkyokuka ။ JASE ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), အဘယ်သူမျှမ SEI Hakusho Wakamomo။ Shogakukan ။Google Scholar
Tanimoto, N. (2008) ။ Renai မျှ Shakaigaku။ Seikyusha ။Google Scholar
Tsuchida, Y. (2018) ။ SEI ya Renai ni Syokyokuteki na Wakamono ။ Y. Hayashi ခုနှစ်တွင် (Ed က။ ), အဘယ်သူမျှမ Sekoudou wa Dou Kawatte Kitaka Seishonen။ Minerva Shobo ။Google Scholar
Tsuji, ဗြဲ, Okura, အိပ်ချ်, & Nomura, Y. (2016) ။ Wakamono Bunka wa 25 nenkan de dou Kawatta ka ။ In Bungakubu Kiyou Shakaigaku Johoshakaigaku (Vol ။ 27) ။ Chuo University က။Google Scholar
Turkle, အက်စ် (2012) ။ တစ်ဦးတည်းကိုအတူတကွ: ငါတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေနည်းပညာထဲကနေပိုလျော့နည်းမျှော်လင့်ထားအဘယ်ကြောင့်။ အခြေခံပညာစာအုပ်များ။Google Scholar
Ushikubo, အမ် (2015) ။ Renai Shinai Wakamonotachi ။ Discover, 21.Google Scholar
ရက်သတ္တပတ်, ဂျေ (2007) ။ ကျနော်တို့အနိုင်ရပြီကမ္ဘာကြီး။ Routledge ။Google Scholar
ရက်သတ္တပတ်, ဂျေ (2011) ။ လိင်၏ဘာသာစကားများ။ Routledge ။Google Scholar
Yamada, အမ် (1996) ။ Kekkon မျှ Syakaigaku။ Maruzen ။Google Scholar
Zimbardo, P. , & Coulombe, N. (2015) ။ က Man (dis) ချိတ်ဆက်။ မြင်းစီးသူရဲ။Google Scholar